Myanmar 18 Plus: သင်းသင်းမွှေးမွှေး နှင်းဖွေးဖွေး - (၃)
သင်းသင်းမွှေးမွှေး နှင်းဖွေးဖွေး - (၃)
သည်လိုနှင့် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဖွေးခြေထောက်လေးတွေက အတော် နာနေပြီ။ တက်ဆီပေါ်မှ ဆင်းပြီးသည်နှင့် ရှုံ့မဲ့မဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်ရင်း..“အရမ်း နာနေလား ဖွေး..”“နာ တာပေါ့.. အာ့ နင့်ကြောင့်..”“အေးပါ.. ဆေးတစ်ခုခု လိမ်းလိုက်မလား.. ငါ လိမ်းပေးမယ်လေ..”“ဘာ ဆေးမှ မရှိဘူး.. ရှိလည်း မလိမ်းဘူး..”“အာ.. ဆောင်းတွင်းက အနာရင်းတတ်တယ်လေ ဖွေးရယ်..”“အုံဖွ လုပ်ပေး..”“အွန်..”“လာ
ပြန်ပြီ ဒီ အွန်.. ငါ သိတယ် စူးရှ.. တကယ်က နင့် စိတ်ထဲမှာ ငါ့အတွက်ဆို ဘယ်တော့မှ အဆင်သင့်မဖြစ်ဘူး.. ပြောလိုက်ရင် လန့်သလိုလို တွန့်သလိုလို.. နင့်ကိုငါ အရမ်း မုန်းတယ် စူးရှ သိလား..”“ကဲပါ ဖွေးရယ်.. ဒေါသက ပြီးမှ ထွက်.. လာ ကြည့်ရအောင်နော်..”
သူ့စကားသံက ဖွေး ရင်ကို အလိုလို သိမ်းသွင်းသွားသည်။ စူးရှ လက်ထဲ အိမ်သော့ ပေးလိုက်၏။ ထော့နင်း ထော့နင်း လျှောက်ဝင်လာရင်း ဖိနပ်စင်နား အရောက်တွင် ဖွေး ပြောစရာ မလိုဘဲ သူကိုယ်တိုင် ဖိနပ်ကို ချွတ်ပေးရန်ပြင်သည်။ မိမိရှေ့တွင် ဒူးတစ်ဘက်ထောက်ကာ ဖိနပ်ချွတ်ပေးနေသော သူ့ကို ကြည့်ပြီး ဖွေး စိတ်ထဲ အားနာခြင်း ရှက်ခြင်း လုံးဝ မဟုတ်သည့် ရင်ခုန်ခံစားမှုကို ရလိုက်ပြန်သည်..။ “ဖြည်းဖြည်းလုပ်.. နာတဲ့နေရာကို မထိအောင် ချွတ်ပေး.. ထပ်နာအောင်လုပ်လို့ကတော့ နင့်ကို ငါ ဆောင့်ကန်မှာနော် စူးရှ..” ။ အရည်ပျော်ကျနေသည့် ကြည်နူးစိတ်ကို ဖုံးအုပ်ရန် နေရင်းထိုင်ရင်း ရန်လိုစကား ပြောပစ်လိုက်၏။ သူ့ အထိအတွေ့များကို အသိစိတ်ကရော မသိစိတ်ကပါ သာယာနေမိသည့် မိမိဖြစ်အင်ကို သူ ရိပ်မိသွားမှာ ဖွေး မလိုချင်ပါ။ခြေထောက်လေးကို ထိန်းကိုင်ရင်း ဖိနပ်ကို ဖွဖွလေး ချွတ်ပေးသည်။ ဖွေး စိတ်ထဲ မိမိခြေထောက်များ အေးစက်စက်ဖြစ်နေသလို ခံစားနေရသော်လည်း ဖိနပ်လေးကို တယုတယ ချွတ်ပေးနေသည့် သူ့လက်ချောင်း သွယ်သွယ်များက နွေးနေ သည်။ ဖိနပ်လေးကို စင်ပေါ် တယုတယ တင်ပေးပြီး အိမ်ထဲ ၀င်ရန် ဖွေးလက်မောင်းကို တွဲကူမည် ပြင်၏။ စောစောက ကားပေါ်မှအဆင်း ခြံထဲအ၀င်လမ်းကို ထော့နဲ့နဲ့ ပုံစံ တမင် လျှောက်ပြခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ “ကိုင်နဲ့.. ဖိနပ် ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကြီး ရွံတယ်..” ပြောပြောဆိုဆို သူ့ရှေ့မှ ကျော်ဖြတ်ကာ အိပ်ခန်းထဲ တန်း ၀င်လာလိုက်၏။ ရင်တွေ ခုန်လွန်းသည်မို့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ထော့နင်းထော့နင်း လုပ်ပြရန်ပင် မေ့သွားတော့သည်။ ပြုံးစိစိမျက်နှာဖြင့် စူးရှ၊ ၀ယ်ခြမ်းလာသည့်
တိုလီမိုလီ စားစရာ ထုတ်များကို ဆွဲလျှက် ခေါက်ငိုက်စိုက်ချကာ နောက်မှ လိုက်လာ၏။ ဖိုင်အိတ်လေးကို ကုတင်ဘေးမှ စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီး“ဒါတွေ နောက်မှာ သွားထားလိုက်မယ်နော် ဖွေး..”ပြောပြီး
မီးဖိုချောင်ဘက် သွားကာ ၀ယ်လာသော စားသောက်စရာများကို ထမင်းစားပွဲပေါ် တင်လိုက်၏။ ဘေစင်မှာ လက်ဆေးသည်။ မိမိ ချစ်ရပါသော သခင်မလေးက သူမစီးလာသည့် ဖိနပ်ကိုကိုင်ထား၍ သူ့လက်ကို ရွံသတဲ့လေ။ ဖွေးကို မြင်မြင်ချင်းကတည်းက သူ တိတ်တခိုး မြတ်နိုးခဲ့မိသည်။ နောက်ပိုင်း သူ့နောက်ကြောင်းများကို စပ်စပ်စုစုနှင့် စွက်ဖက်လာတော့ အနည်းငယ် စိတ်ပျက်မိလာ၏။ သို့သော် သူမနှင့် ဆုံလိုက်တိုင်း သူ့စိတ်အစဉ်ကို တစ်စုံတစ်ရာက လွှမ်းမိုးထားသလို ခံစားမိလာသည်။ ခက်ထန်ရင့်သီးသော သူမ အပြောအဆိုများကို သူ နားယဉ်လာ၏။ သူ့နောက်ကြောင်းကို ဖော်ထုတ်လိုက်မည့် အရေးထက် သူမ အနားမှ ထွက်သွားရန် မောင်းထုတ်လိုက်မည်ကို သူ ကြောက်လာမိသည်။ သူမသာ အလိုရှိပါလျှင် သူ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို သူမ၏ အစေခံတစ်ဦးလို နေသွားရန်အထိပင် သူ မျှော်လင့်မိသည်။ လက်ဆေးပြီးနောက် ဖွေး အိပ်ခန်းထဲ ၀င်လာခဲ့လိုက်၏။ သွေးခြည်ဥသွားသော ခြေဖ၀ါးတော် နုနုကို တယုတယ ပြုစုရန်။ဖွေးလည်း အ၀တ်အစားပင် မလဲဘဲ အိပ်ရာပေါ် မှောက်အိပ်နေသည်။ စူးရှ အခန်းထဲ ၀င်လာ၏။ ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်လိုက်ပြီး.. “ခြေထောက် ကြည့်ရအောင်လေ ဖွေး..” ပြောလိုက်သည့် အသံက တိုးသက်ညင်သာလှသည်။ သူစိမ်းအမျိုးသားတစ်ဦးရှေ့တွင် မှောက်လျက်ကြီး အိပ်နေမိသည့် မိမိ ကိုယ်ကို မလုံမလဲ ဖြစ်သွား၏။ ရင်ထဲတွင် ရှိန်းမြမြ ဖြစ်လာသည်။ စိုးထိတ်ခြင်းတော့ မဟုတ်။ ဖွေး အတွက် စူးရှက တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်စေမည့် လုံးဝ မဟုတ်။ ဒါကိုတော့ ဖွေး အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်မိသည်အမှန်ပင်။ အိပ်ရာထက်မှ ထ ထိုင်ကာ ခြေထောက်ကို တွဲလောင်းချပေးလိုက်၏။ စူးရှ ဘာမှ မပြောဘဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ဖွေး ခြေဖမိုးလေးကို တယုတယ ကိုင် မ လိုက်၏။ ခြေထောက် လှလှလေးက သူ့ရင်ခွင် နှင့် အနီးဆုံးနေရာတွင်ရောက်နေသည်။ “အရည်ကြည်ဖုလေး ဖြစ်သွားတယ်.. သိပ် နာနေလား ဖွေး..”“အင်း.. ရေစိုဝတ်နဲ့ ပွတ်ပေး အရင်..”တကယ်က
အပြင်မှ ပြန်လာပြီး ရေဆေးမထားသည့် ခြေထောက်ကို ကိုင်တွယ်ခိုင်းရန် ဖွေး ၀န်လေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ စူးရှ တစ်ယောက် အ၀တ်စင်ပေါ်မှ တဘက်သေးသေးလေးကို ယူကာ ရေစွတ်ရန် အိပ်ခန်းနှင့် တွဲလျှက် ရေချိုးခန်းသို့ ၀င်လိုက်၏။ ဘေစင်နံဘေး တန်းလေးပေါ်တွင် ပင်တီလေး နှစ်ထည် လှန်းထားသည်။ ဖွေး ရဲ့ ပင်တီလေးတွေပေါ့.. ငါ တစ်ခါ လျှော်ပေးခဲ့တဲ့ ပင်တီလေးတွေ..။ အဲ့သည်တုန်းကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ အတွင်းခံကို ကိုင်ရမှာ သူ လက်တွန့်ခဲ့သည်။ အ၀တ်တောင်းနားသို့ ခြေထောက်နှင့် ကန်ထုတ်နေစဉ် ဖွေး ၀င်လာပြီး အပြစ်ပေးသည့် အနေဖြင့် လျှော်ခိုင်းခဲ့၏။ ညအိပ်ဘောင်းဘီ ဂွကြားတွင် အလိပ်လိုက် ညပ်နေသည့် ပင်တီလေး ဆီမှ ထူးဆန်းသော ရနံ့တစ်မျိုးကို
သူ ယနေ့တိုင် မမေ့။ မာ တောင့်တာင့် ဖြစ်နေသည့် ဂွကြားနေရာလေးကို မထိတထိ တို့ကြည့်ရင်း သူ ရင်ခုန်ခဲ့ရသည်။ မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ မိန်းမကိုယ်မှ အနံ့က ယစ်မူးစွဲလမ်း စရာကောင်းမှန်း ပထမဆုံး အနေနှင့် သူ သတိထားမိခြင်းပင်။ ယခုလည်း လက်တို့က လှန်းထားသည့် ပင်တီလေးဆီ အမှတ်တမဲ့ ကိုင်မိသွားသည်။ လျှော်ထားပြီးသား လေးပေမယ့် ဂွကြားနေရာလေးက ထူကြမ်းကြမ်း ဖြစ်နေသည်။ “စူးး
ရှ.. ငါ နာလို့သေတော့မယ်.. နင် အ၀တ်ရေစွတ်တာက ပြီးဦးမှာလား ဒီနေ့.. ဟင်..
နင် ဒါ.. ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ စူးရှ.. ” အခန်းပေါက်ဝမှ အသံစာစာလေးကြောင့် အိပ်မက်မှ နိုးလာသူတစ်ဦးလို သူ လန့်သွားသည်။ “ငါ မေးနေတယ်လေ.. နားပင်းနေလား.. နင် အဲ့ဒါ ဘာလုပ်နေတာလဲလို့.. ငါ့ပင်တီကို ဘာလုပ်နေတာလဲ.. တောက်..” ပြောပြီး ဖွေး လှည့်ထွက်သွားသည်။ ဟုတ်သားပဲ.. ငါ.. ငါ ဘာလုပ်နေမိတာလဲ.. စူးရှ တစ်ကိုယ်လုံး ထူ ပူသွားသည်။ လက်ထဲမှ ပန်းနုရောင် ပင်တီလေးက သူ့ကို လှောင်ပြောင်နေသယောင်ယောင်။ လက်ကို ဆတ်ကနဲ နောက်မှာ ဖွက်လိုက်ပါသော်လည်း နောက်ကျသွားပြီ မဟုတ်ပါလား။ “ဟားးး… သွားပါပြီကွာ.. တကယ့် ပြဿနာ..” လူက ရှက်တာရော လန့်တာပါ ပေါင်းကာ ချက်ချင်း အငွေ့ပျံသွားချင်လာတော့၏။ စောစောက သည်ပင်တီလေးကို သူ အားပါတရ နမ်းရှိုက်နေမိသည်။ လျှော်ပြီးသားမို့ ထင်ပါရဲ့။ နှာခေါင်းတွင်း ၀င်လာသည့် အနံ့လေးက သူ့အတွက် အားရစရာ မရှိလှ။ သူ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး တဆုံးရှိုက်သွင်းမိ၏။ တစ်ခါရဖူးသည့် အီချိုချို ရနံ့ကို
သူ ပြန်လိုချင်လာသည်။ လူက ဆေးမိသလို အငမ်းမရတုန်ရီလာပြီ။ သည်အချိန် ရုတ်တရက် အော်လိုက်သည့် အသံနှင့်အတူ မှန်၏ အရိပ်တွင် စူးရဲတောက်ပသော မျက်လုံးများနှင့် ဖွေး။ သူမကို ချာကနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်သော်လည်း မိမိနှာခေါင်းပေါ်တွင် ပင်တီလေးကို အုပ်နမ်းလျှက် ကိုင်ထားသည့် သူ့လက်တွေကို
မရုတ်မိ။ သူ ဘာလုပ်နေမှန်း ဖွေး သေသေချာချာ မြင်သွားပြီ။ သည်အခန်းထဲကနေ ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ ပြန်ထွက်ရပါ့။
ကုတင်ပေါ် ငြိမ်သက်စွာထိုင်ရင်း လက်နှစ်ဘက်က အိပ်ရာခင်းကို ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ထားမိသည်။ မျက်ဝန်းထဲတွင် မိမိ အတွင်းခံပင်တီကို အားရပါးရ နမ်းနေသည့် သူ့ပုံရိပ်က မည်သို့မျှ ပျောက်မသွား။ အောက်ပိုင်းမှ စိုစိစိဝေဒနာက ပေါ်လာပြန်သည်။ ပေါင်လေးနှစ်ဘက်ကို စေ့နေအောင် ထိုင်ရင်း စိတ်တို့ကို ငြိမ်အောင် ထိန်းလိုက်၏။ ဟိုးတစ်ရက်က မိမိအ၀တ်အစားတွေကို ခြေနှင့် ကန်ခဲ့သူက အခုတော့ မိမိပင်တီလေးကို ရှိုက်နမ်းနေလိုက်တာမှ မျက်လုံးကြီး စုံမှိတ်ပြီး အားပါးတရ..။ ငါ ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ.. ခုနေများ သူ ငါ့ကို..
အို.. ဘာဖြစ်လဲ.. ကြောက်နေရမှာ ငါ မဟုတ်ဘူး.. အပြစ်ရှိတာကလည်း ငါ မဟုတ်ဘူး.. ခပ်ကုပ်ကုပ်ပုံစံနှင့် ရေချိုးခန်းမှ ပြန်ထွက်လာသည့် စူးရှ။ ပုံစံက လာမည့်ဘေး ပြေးတွေ့တော့မယ့် သူလိုလို။ ခေါက်ငိုက်စိုက်နှင့် မျက်နှာကြီး ရဲတွတ်နေပုံကိုကြည့်ပြီး ဖွေး ပျော်သွားသည်။ မိမိရှေ့လာရပ်နေသည့် သူ့ကို မျက်လုံးထောင့်ကပ်ကာ မော့စောင်းစောင်း ကြည့်လိုက်၏။ မျက်နှာမှ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို တင်းနေအောင် စေ့ထားနိုင်သော်လည်း
အောက်မှ ပိပိလေး၏ နှုတ်ခမ်းများကတော့ ဟစိစိ ဖြစ်နေပြီ။ အံကျိတ်ပြီး တံတွေးတစ်ချက် မြိုချလိုက်နိုင်သော်လည်း ညီမလေးထံမှ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု သက်သေ ချစ်ဝတ်ရည်တွေက တစိမ့်စိမ့် စီးကျနေတော့၏။ စူးရှလည်း ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတော့။ လက်လေးနှစ်ဘက် နောက်ပစ်ကာ ရပ်နေသည့် မိမိပုံစံက တကယ်ပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ အစေခံရုပ် ပေါက်နေပြီလား။ ငါ့ကို တစ်ခုခု ပြောလိုက်ပါတော့ ဖွေးရယ်.. နင် လုပ်နေတာ ငါ့ နှလုံးသားတွေ တဒိန်းဒိန်း တုန်နေပါပြီ.. ငါ့ အငယ်ကောင်လည်း ပေါက်ထွက်တော့မလား မသိဘူး..။ “ဖွေး..” “စူးရှ..” ခေါ်သံနှစ်ခုက တပြိုင်တည်း ပေါ်ထွက်လာသော်လည်း သူမ အသံက မိမိအသံလို
ပျော့စိစိ တိုးဖွဖွ မဟုတ်။ ကတုန်ကရီလည်း ဖြစ်မနေ။ ကြည့်ရတာ ဖွေး ငါ့ကို ဒေါကန်သွားပြီ ထင်တယ်.. ငါ့ကို နှင် ထုတ်လိုက်ရင် ဒုက္ခပဲ.. ဘာဖြစ်လဲ ဒီတော့လည်း ငါတို့ ကြားက သဘောတူညီမှု အဆုံးသတ် သွားတာပေါ့.. ဟူးး.. မဟုတ်သေးဘူး.. ငါ လို ချင်တာ ဒီသဘော တူညီမှု အဆုံးသတ်သွားဖို့ မဟုတ်ဘူး.. ဖွေး နားမှာ ခုလို တစ်သက်လုံး နေရဖို့.. လူကို ပြာကျအောင် ညှို့နိုင်တဲ့ မျက်လုံးတွေ.. စက်စက်ယိုနေအောင် လှသလောက် စကားကို ရင့်ရင့်သီးသီးပြောတတ်တဲ့
နှုတ်ခမ်းတွေ.. ဖွေးရယ်.. ငါ့ ကိုမောင်းမထုတ်ပါနဲ့.. နင်ကျေနပ်တဲ့အထိ.. ငါ..“ဟဲ့.. ငါမေးနေတယ်လေ..”“အင်.. ဟို.. ဘာမေးလိုက်တာလဲ ဖွေး.. ငါ မကြားလိုက်လို့..”“မကြားရအောင် ငါ့ အသံက အဲ့လောက်တိုးနေလို့လား.. ငါ့ အခန်းကရော ပွဲခင်းလို ဆူနေလို့လား..”“မဟုတ်ပါဘူး.. ငါ.. အတွေးလွန်..”“ဘယ်မှာလဲ ရေစို အ၀တ်..”“အော် အင်း..”ရေချိုးခန်းထဲ
ကျန်ခဲသော တဘက်လေးကို ပြန်ပြေးယူလိုက်သည်။ ဒါဆို စောစောက ပြောထားတဲ့ အတိုင်း သူမ ခြေထောက်ကို ပြုစုပေးရမည်ပေါ့။ ဖွေး အစီစဉ် ပြောင်းသွားပုံမရသဖြင့် သူ အနည်းငယ် စိတ်သက်သာရာ ရသွားသည်။ အ၀တ်လေးကို ရေကုန်သည်အထိ ညှစ်ချလိုက်ပြီး သူမထံ ပြန်လာခဲ့လိုက်၏။ သခင်မလေးက ပြတင်းပေါက်နားတွင်ချထားသည့် နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာပေါ် ရောက်နေပြီ။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကို လိမ်လျှက် ဒူးချိတ်ထိုင်နေသည်မို့ ခြေဖမိုးလှလှလေးတစ်ဘက်က လေထဲ လွင့်နေ၏။ ဟိုတစ်ရက်က မိမိလက်နှင့် ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်ပေးခဲ့ရသည့် ခြေထောက်လေး။ ထိုနေ့ကတည်းက သည်ခြေထောက်လှလှလေးကို ကုန်းနမ်းလိုစိတ် ပြင်းပြခဲ့ရသည်။ ခုတော့ သူမကိုယ်တိုင်က အုံဖွ လုပ်ပေး ဟု အမိန့်ပေးထားသည် မဟုတ်ပါလား။ ဖွေးက ပင်တီ ခိုးနမ်းသည့် ကိစ္စကို ဘာမှ မပြော။ သူလည်း ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟု ထပ်မေးမနေတော့ပဲ ကြမ်းပြင်တွင် ထိုင်ချလိုက်၏။ ခြေထောက်ကလေးကို လက်လှမ်းလိုက်တော့..“ဒူး ထောက် ထိုင်..”“……..”“အနာကို မထိစေနဲ့နော်..”“……..”“ရှီးးး.. အ.. အနာ မထိပါစေနဲ့ ဆိုမှ.. နင် တော်တော်.. ကဲ ဟယ်.. ကဲဟယ်..”မိမိ
မျက်နှာ နှင့် လည်ပင်းပေါ် တဖျန်းဖျန်းလာထိသော တစ်စုံတစ်ခု ဆီမှ အီချိုချို
ရနံ့ကြောင့် သူ့ သွေးကြောတွေ ရှိန်းကနဲ ထူပူသွား၏။ အိုးးး… ဖွေး… ဖွေး.. သူ့ပင်တီနဲ့ ငါ့မျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်လိုက်တာပါလား..။ အ၀တ်ကလေးတစ်ခုနှင့် ရိုက်ခြင်းသာဖြစ်၍ စိုးစင်းမျှ နာကျင်ခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် သူမျက်လုံးထဲတွင် ကြယ်တွေ လ တွေ မြင်သွားတာတော့ သေချာ၏။ သူမကို တအံ့တသြ မော့ကြည့်မိတော့ မထိတထိ မျက်နှာပေးနှင့် မျက်ခုံးလေး ပင့်ကာပြန်ကြည့်သည်။ လက်ညှိုး ထိပ်တွင် ပင်တီ လေးကို ချိတ်သလို ကိုင်ထား၏။ အသားရောင် ပင်တီ နွမ်းနွမ်းလေး ဆီမှ သင်းပျံ့သည့် အီချိုချို ရနံ့က သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်း ကြားတွင် နိုးတစ်ဝက် အိပ်တစ်ဝက် ဖြစ်နေသည့် အငယ်ကောင်ကို ငေါက်ကနဲ ထ ထိုင်ချင်လာအောင် နိုးဆွနေတော့သည်။ “ဘာလဲ.. မကျေနပ်ဘူးလား..”“မဟုတ်ပါဘူး.. နင် အရမ်းများ နာသွားလားလို့ပါ..”“သေချာ သတိထားလေ.. ဒီတစ်ခါ ထပ်ထိရင် နင့်မျက်ခွက် တည့်တည့်ကို ငါ တကယ် ဆောင့်ကန်မှာ..”“………”“အဲ့ အ၀တ်က ဘာလို့ဒီလောက် အေးစက်စက် ဖြစ်နေရတာလဲ..”“ရေနွေးနဲ့ လုပ်ပေးရမလား ဖွေး.. နွေးသွားအောင်လေ.. နွေးနွေးလေး ဆိုတော့ အနာ ပိုသက်သာတာပေါ့..”“နွေး သွားဖို့များ.. ရေနွေး လိုသလား.. ရေနွေး မရနိုင်တဲ့နေရာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကဲ..”“အွန်..”“လာပြန်ပြီ ဒီ အွန်.. ငါ နင့်ကို လမ်းမှာ ဘာပြောခဲ့လဲ စူးရှ.. ဘာလုပ်ပေးလို့ ပြောခဲ့လဲ..”“အော်.. အင်း.. ဟို..”“ဘာလဲ နင်က မလုပ်ပေးချင်ဘူးပေါ့.. ဟုတ်လား..”“အာ.. မဟုတ်ရပါဘူး ဖွေးရယ်..”သူ
ပြာပြာသလဲငြင်းရင်း လက်ထဲမှ တဘက်စိုကို လွှတ်ချကာ ခြေဖ၀ါး နုနုလေးကို ယုယစွာ ကိုင်လိုက်သည်။ သခင်မလေး မငြိုငြင်အောင် ကျွန်တော်မျိုး တာဝန်ယူပါ့မယ် သခင်မရယ်.. မလုပ်ပေးချင် ထွက်သွား ဆိုတဲ့ စကားကြီးတော့ မပြောပါနဲ့..။ ခြေသည်းဆိုးဆေး ပုံစံ ဆန်းဆန်းလေးများနှင့် ဖွေးခြေထောက်လေးက
သည်နေ့ ပိုလှနေသည်။ ခြေချောင်းလေးများက ထိပ်ပိုင်း လုံးလုံးလေးတွေ။ ခြေဖ၀ါးပြင်ကလည်း ခွက်ခွက်ကြီးမဟုတ်ဘဲ အတန်ငယ် ညီညီပြည့်ပြည့်လေး ဖြစ်သည်။ ဖနောင့်သားလေးတွေက ပန်းရောင်သန်းပြီး ခြေဗွေရာလေးများမှ လွဲပြီး အရေးအကြောင်း မရှိ၊ ချောမွေ့ ပြေပြစ်နေ၏။ သူ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ဆုံးကတော့ ကော့ညွှတ်နေသည့် ခြေမ လေးများ။ ခြေဖ၀ါးလေးကို
ကိုင်ပြီး မော့ကြည့်ပြန်သည့် စူးရှ အကြည့်တို့က ရီဝေ နေပြန်သည်။ ဖွေး ကတော့ ဆောက်တည်ရာ မရသည့် စိတ်တို့ကို ကောင်းကောင်း စုစည်းနိုင်သွားပြီ ဖြစ်၏။ “ဘာ ကြည့်နေတာလဲ.. ငါ.. တောက်..” ပြောရင်း သူ့မျက်နှာကို လက်ထဲမှ ပင်တီလေးနှင့် ထပ် ရိုက်လိုက်၏။ စူးရှ မျက်လုံး မှေးစပ်စပ် ဖြစ်သွားသော်လည်း မျက်နှာကို မရှောင်။ စောစောက ရေချိုးခန်း အတွင်းမှ မြင်ကွင်းကြောင့် သည်လို စမ်းကြည့်ဘို့ အကြံ ရသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၀တ်ထားသော
ပင်တီလေးကို ချွတ်ကာ သူ ထွက်အလာကို ထိုင်စောင့်နေခဲ့၏။ ပင်တီ ဂွကြားလေးက လတ်တလော ယိုစိမ့်လာသည့် ချစ်ဝတ်ရည်တို့ဖြင့် နွေးထွေး အိစိုနေသည်။ ပင်တီလေးကို ချွတ်ပြီး စိုရွှဲနေသော ပိပိ အတွင်းပိုင်းထိ ထိုးနှိုက်ကာ သုတ်လိုက်သေးသည်။ နမ်း လိုက်စမ်း စူးရှ.. နင် သိပ်နမ်းချင်နေတဲ့ ငါ့ အတွင်းခံကို နမ်းပစ်လိုက်.. နင် အားမရမှာစိုးလို့ ငါ တမင်လုပ်ပေးထားတယ် သိလား..။ စူးရှ တစ်ယောက် ဖွေး၏ ခြေသန်းလေး အရင်းကို ရင်ဆုံး ဟားကနဲ အာငွေ့ပေးလိုက်၏။
မိမိ လက်ပေါ် တင်ထားသည့် ခြေဖ၀ါးနုနုလေးမှ တဆင့် သူမ နှလုံးသားတို့ တဆတ်ဆတ်
လှုပ်ရှား နေသည်ကို သူ ကောင်းကောင်း ခံစားသိလိုက်ရသည်။ သူမ မျက်နှာကို မျက်လုံး လှန်ကာ ကြည့်မိ ပြန်သည့် ခဏ..။ “ငါ့ မျက်နှာ မော့ မကြည့်နဲ့..” ဖျတ်ကနဲ ရိုက်ပြန်သဖြင့် မျက်နှာတစ်ခုလုံး နွေး တက် သွားရပြန်သည်။ ဖွေး.. နင် ငါ့ကို ဓားနဲ့ ထ ခုတ်ရင် ခုတ်ဟာ.. နင့် လက်နက်က ငါ့ အငယ်ကောင်ကို တော်တော် ဒုက္ခပေးတယ်ဟ..။ စူးရှ စိတ်ရော လက်တွေရော တုန်လာသည်။ မိမိ မျက်နှာပေါ်တွင်လည်း ပင်တီလေး၏ ရနံ့များ စွဲနေသလို ခံစားလာရ၏။ ခြေသန်းလေးကို
လျှာနှင့် တို့မိသွားသည်။ ထိုင်ခုံ လက်တန်းပေါ် တင်ထားသည့် ဖွေး လက်ကလေး ရုတ်တရက် လက်သီး ဆုပ်သွား၏။ စိုနွေးနွေး လျှာဖျားလေး၏ အတွေ့က ဖွေး ကိုယ်ပေါ်မှ အကြောအားလုံးကို ဆတ်ကနဲ ဆွဲ ယူလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ စူးရှ
လျှာဖျားလေးက ခြေသန်းနှင့် ခြေသန်းကြွယ်လေးကြားကို ထိုးမွှေလာ၏။ ထို့နောက် ခြေချောင်းလေးများကို တစ်ချောင်းချင်းစီ ဖွဖွလေး စုပ်ပေးနေသည်။ ဖွေး ခံစားချက်တို့ တားဆီးမရနိုင်တော့။ ခြေသလုံး တလျှောက် ကြက်သီးမွေးညှင်းများ ဖြာ တက်လာသည်။ စူးရှ လျှာလေးက ခြေချောင်းလေးများ၏ အောက်ဘက် အခြေနေရာလေးများကို တစ်ချက်ခြင်း တိုးဝှေ့နေ၏။ သကာရည်လူးထားသော နှုတ်ခမ်းလေးကို အငမ်းမရ နမ်းနေသည့်ပမာ ခြေချောင်း နုနုလေးများကို အောက်ဘက်မှ နေ၍ ဖနောင့်လေး ထောင်လျှက်ကိုင်ကာ တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် စုပ်ပေးနေသည်။ ခြေမလေးကို ငုံလိုက်သည့် ခဏ..။“နင့် သွားရည်တွေ ငါ့ခြေဖ၀ါးပေါ် ကျ ကုန် ပြီ..” ဒီစကားလေး တစ်ခွန်းကို ပြောဘို့ လှိုင်းထနေသည့် ရင်ကို အတော် ထိန်းရသည်။ အလိုက်သိသော စူးရှက ခြေဖ၀ါးကို လျှာနှင့် အသာလေး လျှက်တင်ပေးလိုက်၏။ အိုးး… စူးရှ ရယ်.. နင် တအားတော်တယ်..။ ခြေဖ၀ါး အလည်တည့်တည့်ကို လျှာနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှက်ပေးနေသည့် စူးရှ။ တကယ်ပဲ ဖွေးကို စိတ်ပါလက်ပါ ပြုစုပေးနေသည်ပဲ။ ခြေဖ၀ါးလေးဆီမှ ထူးဆန်းမက်မောဖွယ် အထိအတွေ့က ဖွေး ခြေသလုံးနှင့် ပေါင်တံများ၏ အောက်ဘက် တလျှောက်ကို ဖြတ်သန်းကာ တင်စိုင်များဆီ အထိရောက်လာသည်။ တင်စိုင်သားများ ယားကျိကျိ ဖြစ်လာပြီး ကြက်သီးများ လှိုက်တတ်လာသည်။ တင်သားနှစ်ဘက်ကို ကျုံ့လျှက် ဆတ်ကနဲ တွန့်လိုက်မိသည့်ခဏ ပိပိလေး၏ အတွင်းနှုတ်ခမ်းမှလည်း ၀တ်ရည်တစ်စက်ကို ပွက် ကနဲ..။ သည်တစ်ဘက်ပြီး နောက်တစ်ဘက်။ နူးညံ့သော လျှာဖျား၏ အတွေ့အထိက ထူးဆန်းလွန်းသည်။ ခြေဖ၀ါး အလယ်မှ ယားကျိကျိဝေဒနာက အကြောအချင် အားလုံးစီ တမဟုတ်ခြင်း ဖြန့်ကျက်သွား၏။“ရပြီ
စူးရှ.. တော်တော့..” ခြေဖ၀ါးနှစ်ဘက်လုံးကို စိတ်ကြိုက် ဇိမ်ယူလို့ မ၀နိုင်သေးပေမယ့် အချိန်ကလည်း ကြည့်ရသေးသည်။ အချိန်အကြာကြီး ဒူးထောက် ထားရသည့် စူးရှ ခမျာလည်း ညောင်းလှရောပေါ့။ သည်နေ့အဖို့ ရလိုက်သည့် ခံစားချက်က ဖွေး ရင်ကို အတော်လေး လှုပ်ခတ်စေရုံသာမက စူးရှ အပေါ်မှာလည်း တိုး၍
တွယ်တာသွားမိသည် အမှန်ပင်။ သိလား စူးရှ.. ငါ အရမ်းပျော်တယ်.. နင် တခြားမိန်းမကို နမ်းခဲ့တဲ့ ပါးစပ်တွေက ငါ့ခြေထောက်ကို စုပ်ပေးလို့လေ.. သိလား.. ငါ တကယ် ကျေနပ်တယ် စူးရှ.. ဒီအတွက် နင့်ကိုငါ ဘာ ဆုချရင်ကောင်းမလဲ..။ အတွေးနှင့် သူမ စကား စ လိုက်သည်။“ဒီနေ့ ငါ့ကို
လုပ်ပေးတာအတွက် နင့်ကိုငါ တစ်ခုခု ဆုချရမလား စူးရှ.. နင် ငါ့ဆီက တစ်ခုခု လိုချင်လား..” ပြောလိုက်ပြီး သူတောင်းမည့် တစ်စုံတစ်ခုက ဘာများ ဖြစ်လေမလဲ ဟု ရင်ခုန်စွာ စောင့်ဆိုင်း နေမိသည်။ တင်းတင်းစေ့ ထားသော မိမိနှုတ်ခမ်းများ မည်မျှ ထူပူဆာလောင်နေမှန်း မိမိ ကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံးပင်။ စူးရှ ဒူးထောက်နေလျှက်မှပင် ဖွေးမျက်နှာကို ရီဝေေ၀ ငေးကြည့်နေ၏။ ငါလိုချင်တာ တကယ်ပဲ ပေးမှာလား ဖွေး.. တကယ်လို့များ ငါ နင့်ကို တစ်ချက်လောက် နမ်းချင်တယ်
ဆိုရင်ရော.. နင် ပေးမှာလား.. နင့် နှုတ်ခမ်းတွေကို မဟုတ်ရင်တောင်မှ နင့် ကိုယ်ပေါ်က နေရာတစ်ခုခုပေါ့ဟာ.. ချစ်ဝတ်ရည်တွေ ထုံသင်း ရွှဲအိုင်နေမယ့် ဟိုနေရာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.. ငါ တစ်ချက်ကလေးပဲ နမ်းပါရစေဆိုရင် နင်ပေးမှာလား..။ စိတ်က ရှည်လျားစွာ ရေရွတ်မိသော်လည်း နှုတ်ဖျားမှ ထွက်မလာ။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ သူမ မျက်လုံးများကို တည့်တည့်ကြည့်မိတိုင်း ဆွံ့အ သွားတတ်သည့် မိမိကိုယ်ကိုလည်း အားမရ ဖြစ်မိပါသည်။“စူးရှ.. နင် ဘာမှ လိုချင်ပုံ မပေါ်ဘူး ဟုတ်လား..”“ငါ.. ငါ တောင်းတာ ဘာမဆိုပေးမလား ဖွေး.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရလား..”“ပြောကြည့်ပေါ့ ဟ.. ငါ ပေးသင့်တယ်ထင်ရင် ပေးမှာပေါ့..”“……….”“……….”“ငါ သိပ် စိတ်မရှည်တော့ဘူး စူးရှ.. ဆယ် စက္ကန့် အချိန်ပေးမယ်.. ဆယ်စက္ကန့် ပြည့်တဲ့ထိမှ လိုချင်တာ မရှိရင် နင် ပြန်လို့ရပြီ စူးရှ..”“တစ်ဆယ်..”“………..”“ကိုး..”“………..”“ရှစ်..”“………..”“………..”“………..”“နှစ်..”“………..”“တစ်.. ကဲ အချိန်စေ့..”“ပင်တီ ပင်တီ..”“ဘာ..”“နင် စောစောတုန်းက ငါ့ မျက်နှာကို ရိုက်တဲ့ အဲ့ ပင်တီလေး..”“………..”“ဟင် ဖွေး.. အဲ့ ပင်တီလေး ငါလိုချင်တယ်ဆိုရင် ရမလား..”သည်တစ်ကြိမ်တော့
လှပ်ကနဲ တုန်ရီသွားသည့် နှလုံးသားကို ဖုံးကွယ်ရန် ဖွေး သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ ရှိန်းမြ ထူပူလာသည့် နှုတ်ခမ်းလေးကို အမှတ်တမဲ့ ဖိကိုက်ရင်း သူ့မျက်ဝန်းများကို တဒင်္ဂမျှ ငေးကြည့်လိုက်မိ၏။ ပင့်သက်လေးတစ်ချက် မသိမသာ ခိုးရှိုက်ပြီး လက်ထဲမှ ပင်တီလေးကို စူးရှ ပေါင်ပေါ် ပစ်ချပေးလိုက်သည်။ “နင် ပြန်လို့ရပြီ စူးရှ.. ဒီနေ့အတွက် ငါ တကယ် ကျေနပ်တယ်..” နှုတ်ဖျားမှ ထွက်လာသည့် စကားများက အေးစက်နေသော်လည်း မိမိ မျက်ဝန်းများ အရည်လဲ့နေမှန်း ကျွန်ကောင်လေး ရိပ်မိလောက်ပါသည်။ ပေါင်ပေါ် ကျလာသည့် ပင်တီလေးကို တယုတယ ခေါက်သိမ်းပြီး အသည်းယားစရာ အလွန် ကောင်းသော ရီဝေေ၀ မျက်လုံးများဖြင့် ဖွေး မျက်နှာကို သူ ငေးနေပြန်၏။ ဖွေးလည်း ဘာမှ မဖြစ်သလို ပုံစံနှင့် ဆက်တီပေါ် ခြေထောက်လေး ရွှေ့တင်ကာ ပက်လက်ကလေး လှဲချလိုက်သည်။ မျက်လုံးလေး မှိတ်ကာ သူ ဘာဆက်လုပ်မလဲ ရင်ခုန်စွာ စောင့်စားမိသော်လည်း တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွာသွားသည့် လှုပ်ရှားမှုသဲ့သဲ့၏ နောက်တွင် အိပ်ခန်းကလေး ငြိမ်သက်စွာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ငါ သိပ် ပျော့ညံ့တဲ့ကောင်ပါလား ဖွေးရယ်.. တကယ်ဆို နင် လှဲချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပန်းရောင် သမ်းနေတဲ့ နင့်မျက်နှာလေးကို ငါ ငုံ့နမ်းပစ်လိုက်ချင်တာ.. နင် စိတ်ဆိုးသွားပြီး ငါ့ကို တစ်ခုခု ထပ်ခိုင်းအောင်လေ.. သိလား ဖွေး.. ငါ အခု နင့်ဆီမှာ အပြစ်သား ဖြစ်နေရတာ အရမ်း နှစ်ခြိုက်နေမိပြီ.. ပြစ်ဒဏ်ရက်တွေ ထပ်တိုးလာဘို့ ငါ မျှော်လင့်နေမိပြီ.. ဒါပေမယ့် ဖွေး ရယ်.. နင် ပေးမယ့် အပြစ်ဒဏ်က နင့် နားကနေ ချက်ချင်းထွက်သွား ဆိုတဲ့ အမိန့်ကြီး ဖြစ်နေမှာ ငါ သေမလောက် ကြောက်တယ်..နင် တကယ် အသုံးမကျတဲ့ကောင် သိလား စူးရှ.. လိုချင်တာ တောင်းပါ ဆိုတာတောင် ပင်တီ တဲ့.. ငါ့ ကိုယ်ပေါ်က တစ်နေရာရာကို နမ်းပါရစေလို့ များပြောလိုက်ပါတော့လား.. ငါ့ နှုတ်ခမ်းတွေ နင့်ကို လိုအပ်နေတာ နင် မသိဘူးမဟုတ်လား စူးရှ.. တကယ်ဆိုရင် ငါ မျက်လုံး မှိတ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး နေပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ နင် ငါ့ကို ငုံ့နမ်းလိုက်သင့်တာ.. ဒါပေမယ့် ငါ အခု ကောင်းကောင်း သိသွားပြီ.. နောက်တစ်ကြိမ် နင့် အတွက် ပေးမယ့် ဆုက ဘာ ဖြစ်သင့်လဲ ဆိုတာ ငါ့ဘာငါပဲ ဆုံးဖြတ်တော့မယ် စူးရှ.. အခု နင် ယူသွားတဲ့ ပင်တီလေး.. ရေချိုးခန်းမှာ နင် ခိုးနမ်းနေတဲ့ ပင်တီလေး.. အဲ့ဒီ ပင်တီလေးတွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ကို နင် မနမ်းချင်ဘူးလား.. ဟင် စူးရှ.. နင် စွဲလန်းနေတဲ့ ၀တ်ရည်လေးတွေ ထုတ်ပေးတဲ့ ပန်းပွင့်လေးလေ.. အဲဒီပန်းပွင့်လေးကို နင် မနမ်းချင်ဘူးလား..
“နင့် ဖိနပ် အသစ်လေး လှ သားပဲ ဖွေး.. ဘယ်ဆိုင်က၀ယ်လဲ.. ငါ လည်း လိုချင်လို့..” ကျောင်းသွားခါနီး မိမိ ဖိနပ်အသစ်လေးကို မွှေး မြင်သွားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကောင်း ၀င်ချိန်များတွင် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ညီအမနှစ်ဦး လဲလှယ်
သုံးစွဲတတ်ကြ၏။ သို့သော် သည် ဖိနပ်လေးကိုတော့ဖြင့် မွှေး တောင်းစီးမှာ စိုးမိသည်။ သူမ ကားထွက်သွားသည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း ဖိနပ်လေးကို စင်ပေါ်မှ ယူကာ မိမိ အခန်းတွင်းရှိ အ၀တ်စင်အောက်တွင် ၀ယ်လာသည့် ဗူးလေးအတိုင်း ပြန်ထည့်ကာ သိမ်းထားလိုက်တော့သည်။ ဒါ လေးက ငါ့ ဘ၀အတွက် အရေးအပါဆုံး အမှတ်တရတွေရဲ့ အစ ဖြစ်လာမှာ.. သိလား မွှေး.. ငါ့ ချာတိတ်လေးက ငါ့ကို ဘယ်လောက်ထိ ယုယ ကြင်နာလဲ သိလား.. မနေ့က အကြောင်းလေး အတွေးထဲ ပြန်ပေါ်လာတော့ လက်က စီစီတီဗွီ မှတ်တမ်းကို အလိုလို ပြန်ဖွင့်ကြည့်မိသွားသည်။ အရင်က လုပ်ခဲ့သမျှကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ပြန်ကြည့်လေ့ မရှိသော်လည်း မနေ့က မြင်ကွင်းကိုတော့ ဖွေး ပြန်ကြည့်ချင်မိသည်အမှန်ပင်။ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေသည့်
မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ ခြေချောင်းလေးများကို အမြတ်တနိုး စုပ်ပေးနေသည့် ကောင်လေးတစ်ယောက်မျက်နှာ မည်သို့ ဖြစ်နေမည်နည်း။ ထို မိန်းကလေး၏ မျက်နှာ၊ တနည်း မိမိမျက်နှာ က ရော မည်သို့ ဖြစ်နေမည်နည်း။ သူစိမ်းယောင်္ကျားလေး တစ်ဦးကို ရှိန်သည့်စိတ်၊ မိမိ အနိုင်ရနေပြီမှန်း သိလာသည်နှင့်အမျှ အနိုင်လိုချင်လာမိသော စိတ်၊ တစ်ခါမျှ မခံစားဘူးသည့် အရသာ အသစ်အဆန်းကို နှစ်သက်သောစိတ်၊ တကယ်တမ်း တွေးကြည့်တော့ တထိုင်တည်းမှာ မိမိ ခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ်တွေ နည်းမှ မနည်းဘဲ။ သည်လို ဦးတည်ရာ အမျိုးမျိုးကြောင့် စိတ်များ ကစင့်ကလျား လွင့်ထွက်နေချိန် မိမိ ပုံစံ ဘယ်လိုများ ဖြစ်နေမလဲ သိချင်လာသည်။
နောက်တစ်ခုက သက်တူရွယ်တူ သတို့သားလောင်းကို ခုကတည်းက လင်ကိုဘုရား ဖြစ်နေသည့် မွှေးနှင့် မိမိ အခြေနေကို ယှဉ်ကာ ကျေနပ်မိခြင်းလည်း ပါသေး၏။ သိလား
မွှေး ငါ့ ချာတိတ်က နင့် အကောင်လို ကိုကြီးကျယ် မဟုတ်ဘူး.. သိပ်ချစ်ဘို့ကောင်းတယ်.. နင် ဘယ်လောက်ပဲ အချစ်ခံရခံရ ငါ့ကိုတော့ မှီမယ် မထင်ပါဘူးမွှေးရယ်.. သိလား သူကလေ.. ငါ့ကို.. အင်.. ဒါ.. ဒါ.. သူတို့နှစ်ယောက်.. ဘာ လုပ် နေ..ဖန်သားပြင်တွင် ပေါ်လာသည့် မီးဖိုခန်းထဲမှ မြင်ကွင်းကြောင့် ဖွေး ရုတ်တရက် အံ့သြသွားသည်။ မွှေး နှင့် သူ့ချစ်သူ ကောင်းမြတ်။ အီကြာကွေးလို နှစ်ပင်ပူးပြီး မီးဖိုထဲ ၀င်လာသည်။ နှုတ်ခမ်းများကလည်း စုပ် နမ်းလိုက်သေး၏။ ၀တ်ထားသည့် အ၀တ်အစားများ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်ဦးလုံး အိပ်ရာထဲမှ ထ လာခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။ မွှေးက ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်ပြီး အထဲမှ ရေဗူးကို ထုတ်သည်။ ကောင်းမြတ် လက်ထဲ ရေဗူး ထည့်ပေးလိုက်၏။ ကောင်းမြတ်က ဗူးကို ယူပြီး အရင်သောက်၏။ ပြီးမှ မွှေးကို ပြန်ပေးသည်။ မွှေး ရေသောက်နေသည်ကို ကြည့်ပြီး သူမ မဲ့ပြုံး ပြုံးမိသည်။ ငါ့ ချာတိတ်လေးနဲ့များ တခြားစီပဲ.. ရေသောက်တာလေးတောင် သူသောက်ပြီးမှ.. ယောင်္ကျားရဲ့ ဦးစားပေး မခံရတဲ့ မိန်းမ..
ကောင်းတယ်.. နင် အဲ့လို ခံရမှ ကောင်းမှာ..။ ဖွေး စိတ်ထဲက ကျိတ် ကျေနပ်နေမိ၏။ သို့သော် ထို ကျေနပ်အားရမှုက တဒင်္ဂအတွင်း ကြီးစွာသော မနာလိုမှု ဖြစ်သွားရတော့၏။ ကောင်းမြတ်က မွှေး လက်များကို သူ့လည်ကုတ်ပေါ်တင်ပေးလိုက်၏။ ပြီးနောက် တင်စိုင်များကို ဆုပ်ချေရင်း အနမ်းတွေပေးနေကြသည်။ နံရံ ရှိရာသို့ နောက်ဆုတ်လျှက်ပင် တွန်းရွှေ့ သွား၏။ မွှေး တစ်ယောက် နံရံနှင့် ကျော မှီ လျှက် ဖြစ်သွားသည်။ မွှေးမျက်နှာက ကင်မရာနှင့် တည့်တည့် ဖြစ်ပြီး ကောင်းမြတ်က မြင်ကွင်းကို ကျောပေးလျှက် ရှိနေသည်။ မွှေးကို နံရံဆီ တွန်းကပ်ပြီးသည်နှင့် ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် မွှေး၏ ပေါင်တံတစ်ချောင်းကို ဆွဲ မ ကာ ဒူးကို သူ့ တံတောင်ဆစ်တွင် ချိတ်လျှက် တင်လိုက်သည်။ မွှေး၏ လည်တိုင်များကို စုပ်နမ်းနေသည့် ကောင်းမြတ်၊ ခါးအောက်ပိုင်းက ဘယ်ညာ ယိမ်းကာ တညိမ့်ညိမ့် လှုပ်ရှားနေ၏။ လက်တစ်ဘက်က ဒူးအောက်မှ နေ၍ နံရံကို ထောက်ထားပြီး ကျန်တစ်ဘက်က မွှေး၏ ပေါင်ကြားသို့။ သူတို့အတွဲ အချစ်သည်းနေပုံကို ကြည့်ပြီး ဖွေး အလွန် နေရခက်လာသည်။ အပြာကားတစ်ချို့ အင်တာနက်မှတဆင့် သေသေချာချာကို ကြည့်ဖူး ပါသော်လည်း မိမိကြည့်ဖူးသမျှက ပွန်း သရုပ်ဆောင် များသာ မဟုတ်ပါလား။ ခုတော့ မိမိ မြင်ကွင်းထဲတွင် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နှင့် လိင်ဆက်ဆံရန် အစပျိုးနေသည့် မိန်းကလေးက မိမိ အမအရင်း။ ပိုဆိုသည်က သူမ မျက်နှာသည် မိမိ မျက်နှာနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် မဟုတ်ဘဲ ခွဲရ ခက်လောက်အောင် တစ်ထပ်တည်း တူနေခြင်း။ကောင်းမြတ်၏
အနမ်းများက ကြမ်းတမ်း ပြင်းရှလာပုံရသည်။ ပေါင်ကြားကို ထိုးမွှေနေသည့် လက်တို့လည်း သွက်လာ၏။ နံရံကို ကျောမှီလျှက်က မွှေး ခေါင်းလေး မော့ကာမော့ကာနှင့် အရသာ ခံစားနေသည်။ ဖန်သားပြင်တွင် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကြည့်သလို ကြည့်နေရသည့် ဖွေး၊ စိတ်အစဉ်တို့ လောင်မြိုက်ထကြွလာ၏။ မိမိ စိတ်ကို အနှိုးဆွနေဆုံး အရာက ခံစားချက် ပြင်းထန်နေသည့် မွှေး ၏ မျက်နှာ။ မွှေး မျက်လုံးတို့က စုံမှိတ်ထားသည်။ ခေါင်းကို မော့လျှက် ခါးလေးက ကော့လိုက် လွန့်လိုက် ဖြစ်နေသည်။ ကောင်းမြတ်၏ လက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် အလိုက်သင့် လူးလွန့်ကာ အရသာ ခံနေသည်မို့ မျက်နှာက ရှုံ့ကနဲ ဖြစ်သွားလိုက်၊ ပါးစပ်ကလေး ဟောင်းလောင်းနှင့် ခေါင်းကိုမော့လိုက်၊ နောက်ပြီး တစ်ခါ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်တင်းတင်း ဖိ ကိုက်ရင်း ကောင်းမြတ်ကို ကြည့်လိုက်။ သူမ ဖြစ်နေပုံက ဖွေးကို ပိုပြီး သွေးဆာလာစေသည်။ စူးရှရယ်.. နင့်ကိုငါ ဒီ ဖိုင် ပြဖြစ်အောင် ပြမယ် သိလား.. သူများတွေ ကြည့်စမ်း.. ငါ လည်း အဲ့လိုမျိုး လိုချင်လိုက်တာ.. မွှေးနေရာမှာ ငါ.. ကောင်းမြတ်နေရာမှာ နင်
ဆိုရင် ဘယ်လောက်များ.. အိုးး.. ရှီးး..။ ဖွေးတစ်ယောက် ပန်းပွင့်လေးထံမှ ၀တ်ရည်တစ်စက် ပွက်ကနဲ ညှစ်ချလိုက်မိပြန်ပြီ။ အတွင်းသားအထိ လှိုက်တက်လာသည့် ဆာလောင်မှုက ပျောက်မသွားသည့် အပြင် ပို တိုးလာ၏။ ဆုံလည် ထိုင်ခုံလေး၏ နောက်မှီကို အနည်းငယ် လှန်ချလိုက်၏။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကို ကားကာ လက်တန်းနှစ်ဘက်ပေါ်သို့ ဒူး ချိတ်တင်ထားလိုက်သည်။ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်လေးကို ဆွဲမ ကာပင်တီကြားသို့ လက် ထိုးထည့်မိသွားပြီ။ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ မြင်ကွင်းတွင်လည်း မွှေး တစ်ယောက် အရမ်းကြီး အရှိန် တက်လာပုံရသည်။ နံရံကို ကော့မှီကာ ခေါင်းမော့ထား၏။ မျက်လုံးမှေးစင်းကာ ပါးစပ်ကို ၀ိုင်းစက်နေအောင် ဟထားသည်။ ကာမ အရသာကို စိတ်လွတ်လက်လွတ် ခံစားနေသည့် သူမ မျက်နှာ၊ တစ်နည်း မိမိ နှင့် မခြားသော ထိုမျက်နှာ။ မွှေး လက်များက ကောင်းမြတ် လက်မောင်းကို အတင်း ညှစ်ထားသည်။ ပေါင်ကြားကို မွှေနှောက်နေသည့် ကောင်းမြတ် လက်တွေ သွက်သည်ထက် သွက်လာ၏။ မော့ထားသည့် မွှေး လည်တိုင် နံဘေးကို သွားနှင့် ခဲထားသည်။ သည်မြင်ကွင်းကို ကြည့်ရင်း ဖွေး လည်တိုင်လေးလည်း ယားကျိကျိ ဖြစ်လာတော့၏။ လက်တွေကလည်း စိုရွှဲနုဖတ်နေသည့် ၀တ်လွှာနှစ်ခုကြားကို စိတ်ကြိုက် ထိုးထည့် မွှေနှောက်ကာ အဆတ်မပြတ် လှုပ်ရှားမိနေတော့သည်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ မိမိမျက်နှာနှင့် မိန်းကလေးနည်းတူ ဖွေး ၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဒီရေလည်း အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်လာပြီ။ ဖွေးတစ်ယောက် ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်လျှက်က ခါးလေး ကော့တက်လာသည်။ စူးရှ.. အင်းး.. စူးရှရယ်.. နင်သာ ဖြစ်လိုက်ပါတော့.. ငါ့ ဆီ ခုချက်ချင်းလာပြီး ပိပိလေးကို စိတ်ရှိလက်ရှိ နယ်ဖတ် ပစ်လိုက်စမ်းပါ.. နင့် လက်ချောင်း ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်လေးတွေနဲ့လေ.. တစ်ဘက်က ငါ့ ပွင့်ချပ်လေးနှစ်ခုကို ဆွဲကားထား.. ကျန်တဲ့တစ်ဘက်က တွင်းပေါက်ဝ ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ထိုးထည့်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး မွှေ ပေး.. ငါက အဲ့အချိန် ငါက နင့် ဆံပင်တွေကို ဆောင့်ဆွဲပြီး ကိုင်ထားမယ်.. နင့်မျက်နှာကို ငါ့ ပိပိလေးနား မရောက်တရောက်လေး ဆွဲ ကပ်ထားပြီး နင်ကြိုက်တဲ့ ၀တ်ရည်လေးတွေ တစ်စက်ပြီး တစ်စက် ညှစ်ချပေး.. ထွက်လာတဲ့ အနံ့ သင်းသင်းလေးတွေကို နင့်ကို ရှု ခိုင်းမယ်လေ.. အိုးး.. ပြောရင်းနဲ့.. ပြောနေရင်းနဲ့လေ.. ငါ့ ပိပိလေး အတွင်းပိုင်းက ပူနွေးလာပြီ.. ချွဲကျိကျိ ၀တ်ရည်လေးတွေ စီးကျလာပြီ စူးရှ.. နင် နမ်းကြည့်မလား.. ရှီးး.. အ.. စုပ် ကြည့်စမ်း.. ငါ့ ခြေချောင်းလေးတွေကို
စုပ်သလို.. ဒီ ၀တ်ရည်လေးတွေ ကုန်အောင်.. တအားနဲ့ စုပ်.. ရှီးး အင်းး ဟင်းးးး..နှင်းဖွေးဖွေး၏ ဟူးး ကနဲ ပင့်သက် ချသံနှင့်အတူ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ မွှေး လည်း ကောင်းမြတ် ပုခုံးကိုမှီနွဲ့ကာ ငြိမ်ကျသွားသည်။ ကောင်းမြတ်က မွှေး လည်တိုင်ကို အနမ်းများပေးရင်း ကျောလေးကို လက်နှင့် သပ်ပေးနေ၏။ ဟင့်.. မတရားလိုက်တာ.. ငါ့မှာတော့ တစ်ယောက်တည်း.. စူးရှ.. အဲ့ဒါ
နင့်ကြောင့် သိလား.. နင် အူကြောင်ကြောင် လုပ်နေလို့ ငါ့မှာ ခုချိန်ထိ.. အယ်.. သူတို့.. သူတို့ ဘာ ထပ်လုပ်ကြဦးမှာပါလိမ့်..။
သူတို့နှစ်ဦး ထမင်းစားပွဲဘက် လှည့်လာကြသည်။ ထိုင်ခုံတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်ပြီး ကောင်းမြတ်က အရင် ထိုင်လိုက်၏။ ၀တ်ထားသည့် ဘောင်းဘီဇစ်ကို အသာ ဆွဲချပြီး မွှေး ကို မျက်စိတစ်ဘက် မှိတ်ပြလိုက်သေးသည်။ သူတို့.. သူတို့ ဟိုဟာ လုပ်ကြတော့မလို့ပါလား.. ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲ ကိုယ်မလုပ်ဘဲ.. အိုးး.. မွှေး.. ကြည့်စမ်း.. တကယ်ပဲ ဟိုကားတွေထဲက မိန်းမတွေလိုပါပဲလား..။ ကောင်းမြတ်ရှေ့တွင် ဒူးထောက်လျက်ထိုင်ပြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေသော အချောင်းကြီးကို အားပါးတရ စုပ်ပေးနေသည်။ ကောင်းမြတ်ကလည်း မွှေး ဆံပင်များကို
ဆွဲဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သူ့အတံကြီးကို ပါးစပ်ထဲ ကော့သွင်းနေသည်။ ဖွေး ပါးစပ်လေး ဟောင်းလောင်း ဟ လျှက် ထိုင်ကြည့်နေမိ၏။ နောက်နေ့တွေ ကောင်းမြတ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့လျှင် မိမိ မျက်နှာ မည်သို့ ဖြစ်နေမည်နည်း။ အိနြေ္ဒတစ်ခွဲသားနှင့် ဟိတ်ကြီး ဟန်ကြီး နိုင်လှသော ကောင်းမြတ်။ မိမိမျက်နှာကို စေ့စေ့ပင်ကြည့်ဖူးခြင်း မရှိသည့် စတိုင် ခပ်ထွားထွားနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်။ခဏနေတော့ ကောင်းမြတ်က မတ်တပ်ရပ်လိုက်၏။ မွှေးကို ချိုင်းကြားမှ ထူ မ ကာ အနမ်းတွေ ပေးပြန်သည်။ မွှေး ၀တ်ထားသည့် ဂါဝန်လေးကို ဆွဲ မ လိုက်တော့ ဖြူဖွေး လုံးကျစ်သော တင်ပါး လှလှလေး ပေါ်လာ၏။ ကြည့်စမ်း.. သည်မိန်းမ အတွင်းခံ ၀တ်မထားဘူးပဲ.. အင်းပေါ့လေ.. ဒါမှလည်း အဆင်သင့် ဖြစ်တော့မပေါ့.. ကောင်းမြတ် ပုံစံကြည့်ရတာ မိန်းကလေး အတွင်းခံကို ထိချင် ကိုင်ချင်မယ့်ပုံ မပေါ်ပါဘူး.. ကောင်းတယ် မွှေး.. နင်က ဟိုဟာ အလုပ်ခံဘို့ အရေးတောင် အဆင်သင့် အလိုက်တသိ ချွတ်ထားပေးရမယ့် မိန်းမ သိလား..
နင့်ကိုငါ သနားသေး.. အိုးးး… ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ မြင်ကွင်းက ဖွေး အတွေးတို့ကို အဆုံး သတ်ပေးလိုက်ပြန်၏။ မွှေး က ခြေထောက် တစ်ချောင်းကို ထိုင်ခုံပေါ် တင်လိုက်သည်။ ကောင်းမြတ်က ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးထောက်လျှက်။ ဂါဝန်လေးကို လိပ်တင်လိုက်တော့ အမွေးအမျှင်များ ကင်းစင်နေသည့် တောင်ပူစာ လှလှလေး ပေါ်လာသည်။ ကောင်းမြတ် တစ်ယောက် ထိုနေရာလေးကို အနမ်းတွေ ပေးနေတော့၏။ လက်များကလည်း တင်သားနှင့် ပေါင်တံများကို ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ မွှေးလည်း စောစောကလိုပင် မအီမသာ မျက်နှာ မျက်နှာနှင့် လျှာဖျား၏ အရသာကို အားပါးတရ ခံစားနေသည်။ ဖွေး စိတ်တွေလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ဆူဝေ လာပြန်သည်။ သို့သော် သည်တစ်ကြိမ်တော့ သူမ သည်မြင်ကွင်းကို အံကျိတ်လျက်ပင် ကြည့်နေမိသည်။ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားသည့် အနေအထား မဟုတ်ပါလား။ ကောင်းမြတ်က သည်လောက်တောင် ချစ်တတ်သလား.. စူးရှ.. နင် ငါ့ကို ခုလိုမျိုး လုပ်ပေးနိုင်လား.. ငါ လိုချင်သမျှ လုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့.. ဘာ ခိုင်းခိုင်း လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ နင်က အဲ့လိုမျိုး ငါ့ ဟိုနေရာကို နမ်း စမ်း ဆိုရင် နမ်းမှာလား..။ဖန်သားပြင်ကို ထိုင်ကြည့်နေမိသည့် ဖွေး မျက်ဝန်းတွေေ၀၀ါးလာသည်။ စိတ်ထဲမှလည်း မီးတောက်မတတ် ဆာလောင်မွတ်သိပ်လာ၏။ မိမိအဖြစ်က မွှေးနှင့် ယှဉ်လျှင် နောက်မှာ အများကြီး ကျန်နေဆဲပါလား။ သည် အတွေးကြောင့်လား၊ ကာမ၏ အာသီသကြောင့်လား၊ လူက တဆတ်ဆတ် တုန်ရီလာပြန်သည်။ သည်မြင်ကွင်းကို ပိတ်လိုက်ရန် စိတ်ကူးတော့ မပေါ်မိ။ မွှေးတစ်ယောက် သူ့ရင်သားများကို သူကိုယ်တိုင် ဆုပ်နယ်ခြေမွရင်း အောက်မှ ကောင်းမြတ်ကို တစ်ချက်တစ်ချက် ငုံ့ကြည့်လိုက်၊ ခေါင်းလေးမော့ပြီး သက်ပြင်းများ ရှိုက်ထုတ်လိုက်နှင့် ကြည့်ရတာ အတော်လေး ခံစားချက် ကောင်းနေပုံ ပေါ်၏။ ဆတ်ကနဲ
တွန့်တွန့် သွားပြီး ရင်သားများကို နယ်ဖတ်နေသည့် လက်တစ်ဘက်က စားပွဲပေါ် ထောက်လိုက်သည်။ နောက်သို့ လန်ကျလုလု ဖြစ်သွားသော သူမကို ကောင်းမြတ်က လက်တစ်ဘက်နှင့် ထိန်းရင်း ထ ရပ်လိုက်၏။ မွှေးကို ဖက်ထားရင်းမှပင် ၀တ်ထားသည့်
ဂျင်းဘောင်းဘီကို လုံးဝ ချွတ်ချလိုက်သည်။ နောက်ကျောမှ မြင်နေရသည့်
ကောင်းမြတ်ကို ဖန်သားပြင်မှ တဆင့် ဖွေး မရဲတရဲ ကြည့်နေမိ၏။ မိမိနှင့် သိပ်မရင်းနှီးလှသော်လည်း နေ့တိုင်း နီးပါး မြင်တွေ့နေရသည့် သူစိမ်း ယောင်္ကျားတစ်ဦး၏ အ၀တ်မဲ့နေသည့် ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်း။ အမလေး.. ခုနေများ သူ
ဒီဘက် လှည့်လိုက်လျှင်.. သူ့ ဟိုဥစ္စာကြီးက ငါ နဲ့ တည့်တည့် ဖြစ်သွား.. အိုးး…။ တကယ်ပဲ မိမိ အတွေးမဆုံးခင် ခုံတွင် ထိုင်လိုက်သည့် ကောင်းမြတ်၊ မွှေးကို ရီဝေေ၀ ကြည့်ကာ သူ့အတံကြီးကို လက်နှင့် ကစားနေသည်။ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်နေသည့် အနေအထားက စောစောကပုံစံအတိုင်းပေမယ့် ခုက အောက်ပိုင်းတွင် ဘာမှ ၀တ်မထားတော့သည်မို့ မြင်နေရသည့် ဖွေးအတွက် အသက်ရှု ခက်လာရသည်။သူတို့နှစ်ဦး
ချစ်ခရီးက အတန်သင့်ရုံမက ခရီးရောက်ပြီးနှင့်ပုံပင်။ ခုလည်း မွှေးက ကောင်းမြတ်ကို ကျောပေးပြီး ပေါင်ပေါ် ထိုင်ရန် ပြင်နေ၏။ သည် ပုံစံမျိုးကို အပြာကား အချို့တွင် ဖွေး ကြည့်ဖူးသည်။ ခုတော့ မိမိမျက်နှာနှင့် မင်းသမီး၏ သဘာဝကျကျ လှုပ်ရှားမှုကို မြင်ရတော့မည်ပေါ့။ ကောင်းမြတ်က သူ့ အတံကြီးကို လက်နှင့် ကိုင်ကာ တေ့ပေးသည်။ မွှေးလည်း လက်တစ်ဘက်က အနားရှိ စားပွဲကို အားပြုပြီး ထိုင်ချလိုက်၏။ လှုပ်ရှားမှုများက သိပ်ကြီး မမြန်လှသော်လည်း သူတို့နှစ်ဦးလုံး အလျှင်လိုနေကြတာတော့ အမှန်ပင်။ တအိအိ ထိုင်ချလိုက်သည့် မွှေး ကိုယ်ထဲသို့ အတံကြီး တစ်ခုလုံး နစ်ဝင်သွားပြီ။ မျက်နှာကို နောက်လှည့်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းကြပြန်၏။ ဖွေးလည်း မိမိနှုတ်ခမ်းများကို လက်ချောင်းလေးများနှင့် အုပ်ထားမိသည်။ အောက်ပိုင်းမှ စိုစိစိဝေဒနာက သည်းထန်လာပြန်၏။ ကောင်းမြတ်က မွှေး ၀တ်ထားသည့် ဂါဝန်ကို ရင်ဘတ်ကြယ်သီးများ ဖြုတ်ပစ်ပြီး အောက်ပိုင်းကိုလည်း ခါးအထိ လိပ်တင်လိုက်သည်။ ပိပိလေးထဲတွင် အတံထွားထွားကြီး နစ်ဝင်နေသည့် မြင်ကွင်းက ရှင်း ထွက်လာ၏။ နောက်ရက်ကျမှ အနီးကပ် ချဲ့ကြည့်ဦးမည်ဟု စိတ်က တေးထားလိုက်သည်။ ဟင်းလင်းပွင့်နေသည့် ရင်မြွှာ အစုံကလည်း ဖွေးဥ ပြောင်တင်းနေသည်။ မွှေး တစ်ယောက် စားပွဲပေါ် ထောက်ထားသည့် လက်လေးကို ရင်သားများပေါ် နေရာ ရွှေ့လိုက်၏။ ကားယားကြီး ဖြစ်နေသည့် သူမ ဒူးနှစ်ဘက် အောက်မှ နေ၍ ကောင်းမြတ်က တံတောင်နှင့် မ လိုက်သည်။ မွှေး မျက်နှာ နင့် ကနဲ ရှုံမဲ့သွား၏။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး၏ အလေးချိန်က အတံကြီးပေါ် အကုန် ကျသွားလို့ များ နာသွားတာလား။ နီရဲ ပြဲကားနေသည့် ပိပိလေးခမျာလည်း အတော်လေး မချိမဆန့် ဖြစ်နေပုံပင်။ အတွင်းတွင် စိုက်ဝင်နေသည့် အတံကြီးက အပြင်မှပင် ဖောင်းဖောင်းကြီး မြင်နေရသယောင် ဖြစ်နေသည်။ မွှေးတစ်ကိုယ်လုံးက ကောင်းမြတ်ရင်ခွင် အတွင်းမှာ ရုပ်သေးရုပ်လေးလို ဖြစ်နေသည်။ ကောင်းမြတ်က ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ခပ်လျှောလျှော ထိုင်လျက်ကပင် နီရဲပွင့်အာနေသည့် မွှေး ပိပိလေးထဲတွင် သူ့အတံကြီးကို နှစ်စိမ်ထားသည်။ မွှေး ပေါင်တံများကို ဆွဲကားထားသည့် လက်တို့ကလည်း အငြိမ်မနေဘဲ ပေါင်တွင်းသားများကို ပွတ်သပ်ပေးနေ၏။ ကောင်းမြတ်၏ လှုပ်ရှားမှု အားလုံးက ခပ်ဖြည်းဖြည်း။ သို့သော် မွှေးတစ်ယောက် အတော်လေး မချိမဆန့် ခံစားနေရပုံ ပေါ်သည်။ ခဏနေတော့ ကောင်းမြတ် မွှေးခြေထောက်ကို သိုင်းလျှိုထားသည့် သူ့လက်များကို နေရာရွှေ့သည်။ ဖောင်းကားနေသည့် တောင်ပူစာလေးကို လက်နှင့် အုပ်ကိုင်လိုက်၏။ ကျန်လက်တစ်ဘက်က
မွှေး ခါးကို ပွေ့သည်။ အကျီရင်ဘတ်မှ ကပိုကယို ထွက်ကျနေသည့် ရင်မွှာနှစ်ခု ကောင်းမြတ်လက်ပေါ် မေးတင်နေ၏။ ကောင်းမြတ်က ခုံမှ ထ ရန်ပြင်လိုက်တော့ မွှေး သူ့ကို လှည့်ကြည့်ပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ ပုံစံ နောက်တစ်မျိုး အတွက် နှစ်ဦးသား အချက်ပြကြခြင်း ဖြစ်ဟန်တူ၏။ ထိုင်ရာမှ ထ ရပ်လိုက်သည့်တိုင် အောက်ပိုင်းနှစ်ခုက လွတ် မသွား။ စားပွဲကို လက်ထောက်ပြီး နေရာယူလိုက်သည့်မွှေး၊ တင်ပါး လှလှလေးကို အစွမ်းကုန် ကော့ပေးထားသည်။ ကောင်းမြတ်က မွှေး ခြေထောက်တစ်ဘက်ကို ထိုင်ခုံပေါ် တင်စေလိုက်၏။ ထို့နောက် ခါး ကျဉ်ကျဉ်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ အားပြင်းပြင်းနှင့် ဆောင့် သည်။ နောက်တည့်တည့်မှ မြင်နေရသည့် သူ့တင်သားကြီးတွေ ကျုံ့ထားပုံက ကြောက်စရာ ကောင်းလှ၏။ ဆောင့်ချက်များတွင် မည်မျှ အားပါနေမှန်း သိသာလွန်းနေသည်။ စားပွဲပေါ် မှောက်ကျလုနီးပါး အရုပ်ကြိုးပြတ် ဖြစ်နေသည့် မွှေး ကတော့ မည်သို့ နေမည် မသိ။ ထိုင်ကြည့်နေသည့် ဖွေး တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူလာသည်။ မိမိကိုယ်တွင်းမှ လိုအပ်ချက်က မိမိ ကိုယ်တိုင် ဖြေဖျောက်ယူလို့ ရနိုင်သည့် အရာ မဟုတ်တော့မှန်း ဖွေး ခံစားမိလာသည်။ မှန်သလား မှားသလား မဆင်ခြင်နိုင်တော့လောက်အောင်ပင် လူက မွတ်သိပ် လာ၏။ စားပွဲပေါ် တင်ထားသည့် ဖုန်းလေးဆီ လက်လှမ်းလိုက်သည်။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသည့် မိမိ အသက်ရှုသံတို့ အောက်တွင် ဖုန်းခေါ်သံ တစ်ချက်နှင့် တစ်ချက်က မိုင်ပေါင်းများစွာ ကွာဝေးနေ၏။စူးရှ..
ဖုန်း ကိုင်လိုက်စမ်း.. ငါ့ မှာ အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ ရှိနေတယ်.. ဒီ အတွက် ငါ နင့်ကို ချက်ချင်း တွေ့ဘို့လိုလာပြီ.. ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးဘို့ နင်ရယ်.. အေးဆေးတဲ့ နေရာ တစ်ခုရယ်.. ဟုတ်တယ်.. နင် ကိုယ်တိုင် ငါ့ကို ခေါ်သွားရမယ့် နေရာ တစ်ခု.. တိမ်တွေရှိတဲ့ကောင်းကင်ပေါ်ကို လွင့် တက်သွားမှာလား.. ချောက်ကမ်းပါး နက်နက်ကြီးထဲ ပြုတ်ကျ သွားမှာလား.. ဘာမှန်း သေချာ မသိပေမယ့် ဟိုး အဝေးကြီး တစ်နေရာဆီ နင် ငါ့ ကို ခေါ်သွားပေးရမယ်..
“စောလှချည်လား ဖွေး..”“ဟင်.. မေမေ အလုပ်မသွားဘူးလား..”“သိပ်နေလို့မကောင်းလို့သမီးရေ.. ဒီနေ့မှ မနားရင် ပိုဆိုးလာမလားလို့..”“ဖျားလို့လား မေမေ.. မိမွှေး ကြည့်ပေးသွားသေးလား.. ဆေးကော..”“သူက
မေမေ မနိုးခင်ကတည်းက သွားနှင့်တာ ဖွေးရဲ့.. ထားပါ.. သမီး သွားစရာရှိတာသွားလေ.. ပြန်လာမှ မေမေ့ကို ဆေးခန်း လိုက်ပို့ချေ.. ဘွတ်ကင် လုပ်ထားပြီးပြီ..”မေမေကို နှုတ်ဆက်ပြီး ကျူရှင်သွားရန် ခပ်သွက်သွက် ထွက်လာခဲ့သည်။ သည်နေ့ မေမေ အိမ်မှာ ရှိနေမှာဆိုတော့ စူးရှကို အိမ်ခေါ်လာလို့
မရဘူးပေါ့။ မနေ့က ဘွားလေး နယ်သို့ ခဏပြန်သွားသည်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာမည်ဟု ပြောသွားသဖြင့် ဖွေး စိတ်ထဲ ထီပေါက်သလို ပျော်နေမိ၏။ ကျူရှင်က ဒီနေ့ပြီးလျှင် သုံးရက်ဆက်တိုက် နားရက်။ မိမိ စိတ်ကူးများကို အစီအရီ နေရာချပြီး ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိသည်။ သည်မနက် မေမေ အလုပ်မသွားဘူး ဆိုတော့မှ စိတ်က ထင့်ကနဲ ဖြစ်သွား၏။ မေမေက တော်တန်ရုံ နေမကောင်း ဖြစ်ခဲပါတယ်လေ.. သုံးလေးရက်တော့ နားဘို့လိုမယ် မထင်ပါဘူး.. ခုလည်း ကြည့်ရတာ သိပ် အဆိုးကြီး ဟုတ်ပုံမရပါဘူး.. ညနေ ဆေးခန်းဘွတ်ကင် လုပ်ထားတယ်လို့တော့ပြောတယ်.. ဟို ဆရာဝန်လောင်း အဘိုးတန် သမီးကြီးက အမေနေမကောင်းတာ သိတောင် သိရဲ့လား.. အင်းလေ.. ငါလည်း ဘာထူးလဲ.. တကယ်ဆို သည်နေ့ ကျူရှင်ဖျက်ပြီး မေမေ့နား နေပေးသင့်တာ.. ဒါပေမယ့် မေမေရယ်.. ခုလောလောဆယ် ဖွေး စိတ်ထဲမှာက.. တအားကြီးကို.. ဟိုလိုမျိုး..။အတွေးပေါင်းစုံနှင့်
ဖွေး ငှားစီးလာသည့် တက်ဆီက ကျူရှင်ရှိရာ တိုက်အောက်သို့ ရောက်လာပြီ။ စောင့်နေကျနေရာတွင် စူးရှ ရှိမနေ။ ဘာသဘောလဲ စူးရှ.. မနေ့ကလည်း ဖုန်း မကိုင်ဘူး.. ဒီမနက်လည်း နင် ရှိရမယ့်နေရာမှာ ရှိမနေဘူး..။ ဖုန်းခေါ်ကြည့်ရင်း လူက ဟိုဟိုသည်သည် မျက်လုံးဝေ့ ကြည့်လိုက်၏။ ဖုန်းလည်း မကိုင်ပြန်။ တကယ်ပဲ ငါ တစ်ယောက်တည်းပါလား။ ထိုင်နေကျ ဆိုင်လေးဆီ တစ်ယောက်တည်း ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ ရင်ထဲမှာ ဟာနေသည့် ခံစားချက်က ဘာနှင့်မျှ မတူ။ လျှောက်နေကျ လမ်းကပဲ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာသစ်ကြီး ဖြစ်နေသလိုလို။ ဆိုင်ထဲရောက်ပြီးနောက် ဖုန်းထပ်ဆက်တော့လည်း မကိုင်။ သည်လိုနှင့် မိနစ်များစွာ ကုန်လွန်ပြီး မာလာဆွေ ရောက်လာသည်အထိ စူးရှ ပေါ်မလာ။ နောက်ဆုံး ကျောင်းခန်းထဲရောက်ပြီး သင်တန်းချိန် ကုန်လွန်သွားသည်အထိ စူးရှ ထံမှာ တစ်စုံတစ်ရာ အဆက်အသွယ် မရခဲ့။ တကယ်ဆို မိမိတို့နှစ်ဦး သဘောတူညီမှု ယူထားပြီးသည့် အခြေအနေအရ သူ့တွင် အကြောင်းကြီးငယ် သွားလာစရာ ရှိလျှင် မိမိထံ အကြောင်းကြားသင့်သည် မဟုတ်ပါလား။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ညှိနိုင်းခဲ့ကြသည့် အချက်အလက်များတွင် သည်တစ်ခုများ ကျန်ခဲ့လေသလား။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ သူ့အနေနှင့် မိမိအပေါ် သည်လိုပြုမူခြင်းကတော့ လွန်လွန်းသည်ဟု ဖွေး စိတ်မှ တစ်ဘက်သတ် တွေးမိသည်။“ငနုံကောင် နေများမကောင်းလို့လား..”“……….”“ဟဲ့ ဖွေး.. ငါ ပြောတာ ကြားလား.. အယ်.. ဘာလဲဟ.. ငုတ်တုတ်ကြီး ငိုင်နေလိုက်တာ..”“အင်.. ဘာလဲ.. နင် ဘာပြောလိုက်လို့လဲ မာ.. ငါ မကြားလိုက်လို့..”“ခိခိ.. ကြား မလား.. ငါ မပြောလိုက်ချင်ဘူး.. မိန်းမ.. မှန်မှန် ညာစမ်း.. နင့် စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ..”“အာ.. ဘာကို ဘယ်ရောက်ရမှာလဲ.. အာရုံ နောက်ရတဲ့အထဲ.. နင်က တမှောင့်..”“အောင်မာ.. ဒီမှာ နှင်းဖွေးဖွေး.. နင်နဲ့ငါ သိလာတာ မနေ့တနေ့ကမှ မဟုတ်ဘူးနော်.. နင့် စိတ်ကို နင်ကိုယ်တိုင်ပြီးရင် ငါ အသိဆုံး..”မာလာ့စကားကို
ဖွေး ခွန်းတုန့် မပြန်နိုင်ခဲ့ပါ။ နင့် စိတ်ကို နင်ကိုယ်တိုင်ပြီးရင် ငါ အသိဆုံးတဲ့လား မိမာ.. ခုလောလောဆယ် ငါ့ကိုယ်ငါ ဘာဖြစ်နေမှန်း မသိဘူး ဆိုရင် နင် ဘာပြောမလဲ.. ကိုယ် အရမ်းကြီး မက်မောတွယ်တာနေမိတဲ့ အရာတစ်ခု.. ကိုယ့်နားကနေ ရုတ်တရက်ကြီး ပျောက် သွားတာ.. ။ မျက်ဝန်းထောင့်မှ စိုစွတ်လာသလို ခံစားချက်က ဖွေး စိတ်ကို အတော်ပင် ကသိကအောင့် ဖြစ်စေသည်။ ဘာကိစ္စ မျက်ရည် လည်ရတာလဲ.. နင်က ဘာကောင်မို့လို့ ငါ့ကို မျက်ရည်လည်အောင် လုပ်နိုင်ရတာလဲ စူးရှ.. ငါ နင့်ကို အရမ်း မုန်းတယ် သိလား။ သည်လိုနှင့်
ရှည်လျားလှသော နေ့တစ်နေ့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့စွာ ကုန်လွန် သွားခဲ့သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မေမေ့ကို ဆေးခန်း ပို့ဖို့ ပြင်ဆင်၊ ဆေးခန်းရောက်တော့ လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများနှင့် ဟိုသည် ပြေးလွှားရင်း ညစာ စားချိန်နီးမှပင် အိမ်ပြန်ရောက်သည်။ ရေချိုး၊ ထမင်းစားပြီးချိန် အိပ်ရာ ထက်တွင် လှဲချရင်း ဖုန်းခေါ်ကြည့်မိပြန်သေး၏။ ခြောက်ကပ်ကပ် မြည်သံ၏ အဆုံးတွင် လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော ဖုန်းသည် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မရှိပါသဖြင့်..။ကျွန်းကွက် အ၀ါရောင် မျက်နှာကျက်ကေ၀၀ါးလာသည်။ နင့်ကနဲ လှိုက်တက်လာသည့် ပင်သက်ကို မြိုချလိုက်သည့် ခဏ၊ နထင်ဆီမှ ရေနွေးစီကြောင်းတစ်ခုက နားရွက်ထဲအထိ စီးကျလာ၏။ သေလိုက်စမ်း စူးရှ.. နင် သွား သေလိုက်စမ်း.. နင်လည်း အလကားကောင်ပဲ.. ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါ့ကို မျက်ရည်ကျစေတဲ့သူမှန်သမျှ အကုန် အလကားလူတွေချည့်ပဲ.. အဲ့ဒီအထဲမှာ အဆိုးဆုံးက နင်ပဲ.. ဘာလို့လည်း သိလား.. ငါ့ကို တစ်သက် မမေ့နိုင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးခဲ့ပြီးမှ.. ခုလိုကြီး.. ခုလို ရုတ်တရက်ကြီး ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့.. နင် အရမ်း ရက်စက်တယ် စူးရှ.. ငါ မကျေနပ်ဘူး.. သိလား.. ငါ လုံးဝ မကျေနပ်ဘူး..။
“သက်သာရဲ့လား မေမေ..”“အင်းးးး.. ဒီနေ့ ကျူရှင် မရှိဘူးမဟုတ်လားဖွေး.. မေမေ သမီးကို အေးအေးဆေးဆေး ပြောစရာရှိတယ်..”ဘွားလေး
မရှိသည့်ရက်များအတွင်း မီးဖိုချောင် တာဝန်က ဖွေး တစ်ယောက်တည်းအပေါ် လုံးလုံး ပုံကျနေသည်။ ညက တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်သော်လည်း စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှစွာပင် မနက်အစောကြီး နိုးနေမိပြန်၏။ မျက်စိနှစ်လုံးပွင့်သည်နှင့် အရင်ဆုံး မြင်ယောင်မိတာက မိမိကို ငေးကြည့်နေကျ ရီဝေေ၀ မျက်ဝန်းတစ်စုံ။ အချစ်ဆိုတာ တကယ်ပဲ အိပ်စက်ခြင်းများကို တားဆီးတတ်သလား..။ မေမေ့အတွက် မနက်စာ
ပြင်ဆင်ပြီး လာပို့ပေစဉ် မေမေ စကားပြောလိုသည် ဆို၍ ဆန်ပြုတ်ပန်းကန်လေး ချကာ မေမေ့ အနားတွင် ထိုင်လိုက်၏။“သမီးမှာကော ချစ်သူရှိနေပြီလား ဖွေး..”“ရှင်.. ဟို..”မေမေ
မေးလိုက်ပုံက ရုတ်တရက်ကြီးမို့ ဖွေး ဘာပြန်ဖြေရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားသည်။ ချစ်သူတဲ့လား မေမေ။ သည်အချိန်မှာ ချစ်သူဆိုတဲ့ စကားလုံးက သမီးအတွက် သိပ် မုန်းစရာကောင်းလွန်းပါတယ်။ မေမေ့ ကြည့်ရတာ အနည်းငယ် မောနေပုံပင်။ မေမေ့ မျက်နှာကို ငေးကြည့်နေမိသည့် ဖွေး။ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုကို ကြောက်လာမိသည်။ အသက် (၅၀) မပြည့်သေးသော်လည်း လောကဓံ၏ အထုအထောင်း များကြောင့်လား၊ လတ်တလော ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာကြောင့်လား၊ မေမေ့ မျက်နှာမှာ လိုတာထက် ပို၍ အိုစာနေသယောင် ထင်မိသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီး လင်ယောင်္ကျား မရှိပါဘဲ သမီးနှစ်ယောက်၏ ဘ၀ ကို တစ်ယောက်တည်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ရှာသည့် မေမေ။ မေမေ အတော်ကြီး ပင်ပန်းခဲ့ပြီပဲ။ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးခဲ့မိသော အတွေးများဖြင့် မေမေ့ မျက်နှာကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ဖွေး လက်ကလေးများကို လာရောက် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည့် မေမေ့ လက်များ အေးစက်နေ၏။ မနေ့က ဆေးခန်းတွင် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး၏ စစ်ဆေးချက် လက္ခဏာများ အရ မေမေ့ ကျောက်ကပ်တွင် ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိနေပုံပေါ်သည်။ လိုအပ်သော ကုသမှုများအတွက် ဆေးစစ်ချက် အဖြေများက နက်ဖြန်မှ ရမည်။ သူဌေးရောဂါဟု ဆိုရလောက်အောင်ပင် ငွေကုန်ကြေးကျ များတတ်လွန်းသည့် ဝေဒနာမို့ သည်အိမ်အတွက် အိမ်ထောင်ဦးစီး မေမေ၊ ငွေရေးကြေးရေး တွေးပူနေခြင်း ဖြစ်ဟန်တူ၏။ ဖွေးလည်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မတွေးဘူးသော သည်အိမ်အတွက် ငွေကြေး ကိစ္စများ၊ မေမေ့ ၀င်ငွေနှင့် လုပ်ငန်း အခြေအနေ စသည်တို့ ခေါင်းထဲ ၀င်လာခဲ့၏။ ဒါတွေ ခုမှ တွေးမိသည့် အတွက်၊ မေမေ့ကို မေ့ထားမိသည့်အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် နောင်တ ရမိသည်။“နောက် နှစ်လလောက်နေရင် မွှေး က လက်ထပ်တော့မယ် မဟုတ်လား.. ဖွေး မှာရော ရည်ရွယ်သူ ရှိနေပြီလား မေမေ သိချင်လို့လေ..”“အာ မရှိပါဘူး မေမေရာ.. ဖွေးက မေ့နားမှာ တစ်သက်လုံး နေမှာပါ..”မေမေ့
မျက်နှာ ပြုံးရင်း ခေါင်းလေး အသာ ငြိမ့်၏။ ဖွေးလည်း ပြန် ပြုံးပြမိသည်။ အာရုံထဲတွင် ဖျတ်ကနဲ ပေါ်လာသည့် ပုံရိပ်တစ်ခုကြောင့် မိမိ အပြုံး ပီပြင်ပါ့မလားဟု တွေးကာ ခေါင်းကို ခပ်မြန်မြန် ငုံ့လိုက်ရ၏။ မိမိ အမူအရာကို
မေမေ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်သွားသည်။“မေမေ့ကို အမှန်တိုင်းတော့ ပြောမှ ဖြစ်မယ်နော် ဖွေး.. သမီး အဖြေပေါ် မူတည်ပြီး မေမေ ပြောစရာ ရှိလို့လေ.. အရေး ကြီး တယ်..”တိမ်ဝင်သွားသည့် မေမေ့ အသံလေးကြောင့် ဖွေး စိတ်ထိခိုက်သွားမိသည်။ မေမေရယ်.. ဘာတွေများ ပြောချင်လို့လဲ..။ “ဖွေး မညာပါဘူး မေမေ.. မေမေ ပြောစရာရှိတာ ပြောပါ.. ဒါပေမယ့် ခု မေမေ မောနေလားဟင်.. မေမေ ပြောမယ့် ကိစ္စက နောက်မှ ပြောလို့ မရဘူးလား..”“ဖွေး ကို မေမေ အိမ်ထောင် ချပေးချင်တယ်..”“ရှင်..”ပြောပြီး
မေမေ ခဏ အမောဖြေနေသည်။ နှဖူးတွင် စို့လာသည့် ချွေးလေးများကို ဖွေး သုတ်ပေးလိုက်၏။ မေမေ့ ကြည့်ရတာ စကားတစ်ခုကို လိုရင်းပြောနိုင်ဘို့ ကြိုးစားနေရပုံပင်။ မေမေ မောနေမှန်း သိသော်လည်း ဆက်ပြောမည့် စကားကိုတော့ ဖွေး အမြန်ဆုံး သိချင်မိသည်။ ဖွေးကို အိမ်ထောင် ချပေးချင်တယ်တဲ့လား မေမေ။ မေမေ ရုတ်တရက်ကြီး သည်လို ဘာလို့ ပြောရတာလဲ.. မဟုတ်မှ လွဲရော.. ရုပ်ရှင်တွေ
ထဲကလို မေမေ့မှာ.. ဘုရား ဘုရား.. မဟုတ်ပါစေနဲ့..။“တကယ်က မေမေ့ အလုပ်တွေ သိပ် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ သမီး..”“……….”“သမီး ဖေဖေရဲ့ မိတ်ဆွေ မိသားစုက ကူညီပေးနေလို့ မေမေ ခုလောက်ထိ ရပ်တည်နေနိုင်တာ..”“……….”“မွှေး ရဲ့ ပညာသင် စရိတ်ကလည်း မသေးလှဘူး မဟုတ်လား..”“……….”“အခု မေမေ အိပ်ရာထဲ လဲရပြီ ဆိုရင် ဒီအကြောင်းတွေ သမီး သိမှ ဖြစ်တော့မယ်လေ..”ဖွေး
မျက်ရည် လည်လာမိသည်။ မေမေ့ ခမျာ သမီးနှစ်ယောက် အတွက် ရုန်းကန်ရင်း အဆင်မပြေမှုများကိုပါ မြိုသိပ်ခဲ့ရတာပါလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလို မေမေ ခွန်အားနည်းနေချိန် အနားမှာ ရှိခွင့် ရတာကိုတော့ ဖွေး ကျေနပ်မိသည်။ စောစောက
ပြောစကားအရ မေမေက မိမိကို မွှေး ထက်ပို၍ အားထားကြောင်း သိလိုက်ရသည် မဟုတ်ပါလား။ ဖွေး ကို အိမ်ထောင် ချပေးချင်တယ် ဟူသော စကားနှင့် ပတ်သက်၍တော့ အနည်းငယ် ရင်ထိတ်မိသည်။ မိမိ ဆန္ဒမပါဘဲ မိဘ စီစဉ်သည့် ယောင်္ကျားတစ်ဦးနှင့် တစ်သက်လုံး အတူနေရမည့် ကိစ္စကိုတော့ အိပ်မက်ပင် မမက်ခဲ့။ မေမေ ဆက်ပြောမည့် စကားကိုပဲ ရင်တမမနှင့် နားစွင့်နေမိသည်။“ဒီအခြေနေအတိုင်း ဆိုရင် မေမေတို့ လုပ်ငန်းတွေ ဆက်ရပ်တည်နိုင်ဘို့ ခက်နေပြီ ဖွေး.. အထူးသဖြင့် ဒီအလုပ်တွေကို ဆက်ဦးဆောင်ရမယ့် သမီးအတွက် အရမ်း..”“မောနေရင် နားပါ မေမေရယ်.. မေမေ နေကောင်းသွားမှ ဖွေး နဲ့ တိုင်ပင်မယ်လေ နော်..”“ရပါတယ်.. မေမေ ခုပဲ ပြောချင်တယ်..”“…………”“အခု မေမေ့ကို ကူညီနေတဲ့ မိတ်ဆွေ.. သမီးတို့ဖေဖေရဲ့ သူငယ်ချင်းပါပဲ.. သူက သူ့သားနဲ့ သမီးကို နေရာ ချထားပေးချင်တယ်တဲ့..”“…………”“မေမေ စကားကုန်တော့ မပြောရသေးပါဘူး ဖွေးရယ်.. သမီးမှာ တခြား ရည်ရွယ်သူ မရှိရင်တော့ သူတို့ ကမ်းလှမ်းတာကို မေမေ မငြင်းချင်ဘူး..”“ဟိုလေ.. ဖွေး တစ်ခု မေးရမလား မေမေ..”“…………”“မေမေ့ မှာ သူတို့ကို ပေးစရာ အကြွေးတွေ ဘာတွေများ..”“သမီးငယ် ရယ်..”“ဟင့်အင်း.. စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ မေမေရယ်.. မေမေ အရမ်း ပင်ပန်းနေပြီ..”“မေမေ့မှာ
ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲရှိရှိ.. သမီးလေးကို အကြွေးနဲ့ အသိမ်းခံရတာမျိုးအထိတော့
မေမေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး ဖွေးရယ်.. ခုက အကြွေး ဆိုတာထက် သမီး ရှေ့ရေးအတွက် သင့်တော်တဲ့သူမို့လို့ မေမေ ပြောတာပါ.. မေမေ သမီးနှစ်ယောက်လုံးကို စိတ်ချ သွားချင်တယ်..”“မေမေ ရယ်..”ကုတင်ခေါင်းရင်းတွင် မှီလျှောလျှော ထိုင်နေသည့် မေမေ့ ရင်ခွင်ထဲ ဖွေး တိုးဝင်မိသည်။ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာမက အမှတ်တမဲ့ နေမိခဲ့သော မေမေ့ရင်ခွင်က နွေးနေဆဲပါလား။ ဖွေး လက်ကလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် မေမေ့ လက်များ တုန်ရီနေရှာ၏။ မေမေ့ နှလုံးခုန်သံများထဲတွင် ကျဉ်းကြပ်မှုများ ရောနှောနေမှန်း ဖွေး ခံစားလိုက်မိသည်။ ဖွေး ခေါင်းထဲတွင်လည်း အတွေးရောင်စုံများ ယောက်ယက် ခတ်ကုန်သည်။ မိမိ ဘ၀ အတွက်သာမက မေမေ့ အတွက်ပါ အရေးအကြီးဆုံး အချိန်ဖြစ်နေမှန်း ခံစားလိုက်မိ၏။ အနာဂတ် လမ်းဖြောင့်သွားပြီ ဖြစ်သည့် မွှေး
တစ်ယောက်ကတော့ ဒါတွေ သိချင်မှ သိပါလိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာ မေမေ့ နားတွင် အနီးကပ်နေပေးနိုင်ယုံမျှမက၊ မေမေ တစ်ယောက်တည်း ကျိတ်ရင်ဆိုင်နေသည့် သောက အချို့ကို မွှေး ထက်အရင် သိခွင့်ရခြင်း၊ မေမေ့ကို တကယ် ကူညီနိုင်သူသည် သင်းသင်းမွှေး မဟုတ်ဘဲ မိမိ ဖြစ်နေခြင်းတို့ အတွက်တော့ ဖွေး တကယ်ပဲ ကျေနပ်မိသည်။ သို့သော် မေမေ့ ဆန္ဒ ပြည့်ဝစေဘို့ မိမိ စွန့်စားရမှာက တစ်ဘ၀လုံးစာ မဟုတ်ပါလား။ မိမိ စတေးရမှာက နှလုံးသား၊ တစ်သက်လုံး ထိန်းချုပ်ရမှာက ဦးဏှောက် အသိတရား။ နှင်းဖွေးဖွေး၏ အသိအာရုံအားလုံး မျက်ဝန်းများနှင့် အတူ ရီဝေမှုန်ဝါးခဲ့ရပါသည်။ဖွေး
ဘာလုပ်ပေးရမလဲ မေမေရယ်.. ခုနေ ဖေဖေရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ.. သမီး နှစ်ယောက်အတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်း ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ မေမေ.. အခု အရမ်း အားနည်းနေပြီ.. ဒီအခြေနေထိ ရောက်အောင် မေမေ့ကို ဖွေး ပစ်ထားခဲ့မိတယ်.. မေမေ
အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတဲ့အတွေးကို တစ်ခါမှ မတွေးဘဲ လောကကြီးကို မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ အချိန်တွေ ဖြုန်းခဲ့မိပြီလား.. ဒီအကြောင်းတွေ ဖေဖေသာသိရင် ဖွေးကို စိတ်ဆိုးမှာလားဖေဖေ.. မေမေ့ကို မကူပဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေခဲ့မိတဲ့ ဖွေးကို ဖေဖေ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါ့မလား.. ဖွေး မှာ အချိန် မှီသေးလား.. မေမေ့အတွက် အကောင်းဆုံး အထောက်အကူ ဖြစ်အောင် ခုချိန်မှာ
ဖွေး လုပ်ပေးနိုင်တယ်လား.. ဒါပေမယ့် ဖွေး လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကြီးက …………. ……………….. ……………..စူးရှရယ်.. ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ ဟင်..
မာလာ့ကို သေသေချာချာ ပြောထားရဲ့လား ဖွေး.. မေမေ စိတ်ပူတယ်နော်..”“စိတ်ပူပါနဲ့ မေမေရယ်.. ဖွေး ပြောပြီးပါပြီ.. မေမေသာ ဟိုမှာ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူခဲ့.. စိတ်ညစ်စရာတွေ ဘာမှမတွေးဘဲနဲ့လေ နော်..”“သမီး ပါရင်တော့ ပို အဆင်ပြောတာပေါ့ ဖွေးရယ်..”“မွှေး တစ်ယောက်လုံးပါနေတာပဲ မေမေရဲ့.. ကောင်းမြတ်ကလည်း ခုမှ သိတဲ့သူမှ မဟုတ်တာ.. မေမေ အဆင်ပြေမှာပါ..”လွန်ခဲ့သည့်
နှစ်ရက်က မွှေး မင်္ဂလာပွဲ ပြီးပြီ။ ငွေဆောင် ကမ်းခြေကို ပျားရည်ဆမ်းခရီး သွားကြမည်ဖြစ်၏။ မွှေးတို့ လင်မယားက မေမေ့ကိုပါ လိုက်ခဲ့ဘို့ ပြောသည်။ ဖွေးလည်း စီးပွားရေး ကိစ္စများကြားတွင် လုံးလည်လိုက်ပြီး ကျန်းမာရေးပါ ထိခိုက်နေရသည့် မေမေ့ကို အေးအေးဆေးဆေး အနားယူစေချင်ပါသည်။ မေမေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခရီးတစ်ခုခုသွားရန် ဆန္ဒရှိပုံပေါ်၏။ သို့သော် အတူသွားရမည်က ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံ ဖြစ်နေသည့်အပြင် ဖွေးကလည်း မလိုက်လိုပါဟု ပြောထားသဖြင့် မေမေ ဤသို့ တုန့်ဆိုင်းနေခြင်းပင်။ တမင် ကတ်ဖဲ့ခြင်း မဟုတ်သော်လည်း မိမိမျက်စိရှေ့တွင် တီတာ တွတ်ထိုးနေမည့် ဤစုံတွဲကို ဖွေး မည်သို့မျှ ကြည့်လို့ရမည် မထင်။ သိပ်မကြာသေးမီ အချိန်ကပင် မေမေ့ဆန္ဒ အားလုံးကို ခေါင်းငြိမ့် လက်ခံခဲ့ပြီမို့ သမီး အလိမ္မာလုံးလုံး ဖြစ်သွားသော ဖွေးကို မေမေ တစ်စုံတစ်ရာ စောဒက မတက်ခဲ့ရှာပါ။ ဘွားလေးကလည်း မနေ့ကတည်းက တရားစခန်း ၀င်သွားသည်။ အိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့မည့် ဖွေးအတွက် မာလာ့ကို ညခေါ်အိပ်ရန် မေမေ မှာနေခြင်းဖြစ်၏။“သွားကြမလား မေမေ..”“အေးအေး.. မေမေ စိတ်ချမယ်နော် ဖွေး.. မာလာ့ဆီ ဆက်ဖြစ်အောင်ဆက်ဦး.. ညကျ မေမေ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်..”ကားပေါ်သို့
အထုတ်အပိုးများ လိုက်တင်ပေးလိုက်သည်။ မေမေတို့ ကားထွက်သွားပြီး ခြံတံခါးပိတ် အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့၏။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းတို့ လွှမ်းမိုးနေသော သည်အိမ်ကြီးထဲတွင် မိမိ တစ်ယောက်တည်းပါလား။ ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်သော အပြုံးတစ်ချက်ကို ပြုံးလိုက်မိသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်လခန့်က ယခုလို အိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်း ကျန်ရမည့် အခွင့်အရေးကို ဘယ်လောက်တောင် မျှော်လင့်ခဲ့ရလဲ။ သည်လို နေ့မျိုးက မိမိ အတွက် ဘယ်လောက်တောင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ရင်ခုန် ကြည်နူးစရာ ကောင်းခဲ့သလဲ။ မိမိကို အိမ်ထောင် ချပေးချင်သည်ဟု မေမေ ပြောခဲ့ပြီးနောက် ကျူရှင် ဖွင့်ရက် ပြန်ရောက်လာသော်လည်း စူးရှတစ်ယောက် လုံးဝ ပျောက်နေခဲ့သည်။ ဖုန်းဆက်လို့လည်း မရသည့်နောက်ဆုံး ကြေကွဲ ဆွေးမြည့်နေသော မိမိနှလုံးသား၏ အလိုကို လိုက်ပြီး စူးရှ နေထိုင်ရာ ဆရာ့အိမ်သို့ ဖွေးတစ်ယောက် မိုက်မဲစွာ ရောက်သွားမိပါသည်။“အန်တီ့ကို
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောနော် သမီး.. စူးရှနဲ့ ဘာ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ခဲ့လို့လဲ..”
ဆရာကတော် သည်လို မေးလာချိန် ဖွေး ရှက်လွန်း၍ အငွေ့သာ ပျံထွက်သွားလိုက်ချင်တော့သည်။ သွားလေသူ ဖေဖေ့ မျက်နှာကိုလည်း ဖျတ်ကနဲ မြင်ရောင်မိသည်။ ဖေဖေရေ.. ဖေဖေ အားကို တန်ဘိုးထားခဲ့တဲ့ သမီးက ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် ပျောက်သွားလို့ လိုက်ရှာနေသတဲ့.. ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲလို့ အမေးခံရလောက်အောင် သမီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေပြီထင်တယ် ဖေဖေရယ်.. အဲ့ဒါ နင့်ကြောင့် စူးရှ၊ ခုနေ နင့်ကိုတွေ့ရင် မသေမချင်း မျှင်းပြီး သတ်မယ် သိလား.. ငါ နင့်ကို သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် လွမ်းနေတယ် သိလား..။“ဟိုလေ အန်တီ.. ဘာ မှ ဖြစ်ခဲ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး.. ဟိုဥစ္စာ..”“စူးရှ
အကြောင်းက အန်တီလည်း သိပ် မသိဘူး သမီးရဲ့.. သမီးက အန်တီ့ သမီးအရွယ်လေးမို့လို့ စိတ်ပူမိတာလေ.. အန်တီ့ကို အမေလိုသဘောထားပြော.. ဒါမှ မဟုတ်လည်း သမီး သူငယ်ချင်းလို သဘောထားလိုက်.. စူးရှကို အိမ်အထိ လာရှရလောက်အောင် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ ရှိနေသလား သမီး..”ကြင်နာနူးညံ့စွာမေးလိုက်သည့်
အန်တီ့မျက်နှာတွင် မိမိကို တစ်စုံတစ်ရာ အထင်မြင်သေးခြင်းမျိုးတော့ လုံးဝ ရှိမနေပါ။ သားသမီး မရှိသူမို့ ကလေးချစ်တတ်သည်ဟု သိထားသော အန်တီ့ကို အလှူရက်ကသာ တွေ့ဖူးခြင်းဖြစ်ပြီး သိပ်ကြီးလည်း မရင်းနှီး။ တက္ကသိုလ် ဆရာမ တစ်ဦးဖြစ်သည့် အန်တီက ခေတ်လူငယ်တွေကို အများကြီး နားလည်ပုံ ရပါသည်။ ယခုလည်း ဖွေးပုံစံ ဖြစ်အင်က အပူရုပ်ကို ဟန်လုပ်ဖုံးပြီး လင်ပျောက်ရှာနေရသော
မိန်းမမိုက်လေးနဲ့များ တူနေပြီလား။ ရှက်လွန်းလို့သာ သေရကြေးဆို နှင်းဖွေးဖွေး ချက်ချင်း အသက်ထွက်သွားနိုင်ပါသည်။ မစဉ်းစား မဆင်ခြင်နိုင်လောက်အောင် ထွက်လာမိပြီးမှ သည်အချိန် သည်အိမ်မှာ ဆရာရှိမနေတာ တော်သေးသည်ဟုပဲ တွေးရတော့၏။“အအေးလေး သောက်လိုက်ဦးသမီး.. အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြတာပေါ့.. စူးရှ ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိပေမယ့် သမီး အခက်အခဲကိုတော့ အန်တီ ကူညီနိုင်လောက်ပါတယ်.. ”“ဟို.. သမီး နဲ့.. သမီးနဲ့ စူးရှက.. ဟိုလေ အန်တီ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး..”“…………”“ဟိုလေ
အန်တီ.. သမီးတို့ကြားမှာ.. …... အန်တီ စိတ်ပူလောက်ရမယ့် ပတ်သက်မှုမျိုး.. …… အဲ့လို မျိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူးအန်တီ.. ဒါပေမယ့် သူ ရုတ်တရက်ကြီး ဘာမပြောညာမပြော ပျောက်သွားတော့.. သမီး.. ဟို.. သမီး သိချင်လို့ သက်သက်ပါ.. သူ.. သူ ဘယ် ရောက်နေတာလဲလို့.. သိချင်လို့ သက်သက်ပါ..”ကြင်နာရိပ် သန်းနေသည့် အန်တီ့ မျက်ဝန်းများက ဖွေးအတွက် လုံခြုံစေပါသည်။ အန်တီ ဘာကို စိုးရိမ်နေမှန်းလည်း ဖွေး နားလည်မိသည်။ တကယ်လည်း မိမိ အဖြစ်က လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တွေးပူစရာ မဟုတ်ပါလား။ အထူးသဖြင့် မိမိလို အရွယ်ရောက်ပြီးစ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦး အနေနှင့် ရွယ်တူ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို
လိုက်ရှာနေမိခြင်းက ရိုးရှင်းသော ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်မှန်း များစွာ သိသာစေသည်ပဲလေ။ မိခင်စိတ်ကြီးမားသော အန်တီဆရာမ၏ နွေးထွေးသော အကြည့်များကြောင့် စူးရှကို လာရှာမိသော ဖွေး၊ အလွန် ရှက်မိသော်လည်း စိတ်သက်သာရာတော့ ရခဲ့ပါသည်။ လူက ထူပူနေမိသော်လည်း ရင်ထဲရှိရာကို အမှန်အတိုင်း ပြောပြဘို့ သတ္တိဝင်လာမိ၏။ ရောက်လာပြီးသည့် နောက်တော့ တွန့်ဆုတ်နေလို့လည်း မထူးတော့ပြီ မဟုတ်ပါလား။ အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့နှင့် ရှင်းပြလိုက်သော စကားများကြောင့် ဖွေး၏ ဖြစ်အင်ကို အန်တီ နားလည် သွားပုံရပါသည်။ သက်ပြင်းလေးတစ်ချက် မသိမသာ ချပြီး..“’ဒီလို ဖွေးရဲ့.. စူးရှက အန်တီတို့ အိမ်မရောက်ခင်က နေ့ဘက် ကျောင်းတက်ရင်း ညဘက်တွေ တက်ဆီမောင်းတယ်.. ကောင်လေးက ရိုးသားပါတယ်.. အနေလည်း အေးတယ်.. တစ်ရက် ဆရာ့ အကိုတစ်ယောက် သင်္ဘော ပြန်တက်ခါနီး.. ညဘက် ဆိုင်သွား စားကြသောက်ကြတယ်လေ.. အားလုံးက မူးနေကြတော့ အိမ်အပြန် ကားမောင်းဘို့ အဆင်မပြေဘူး မဟုတ်လား.. အဲ့မှာ ကားငှားစီးရင်း ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့အကိုရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံ ၁၀သိန်းနီးပါး ထည့်ထားတဲ့အိတ်.. စူးရှ ကားပေါ် ကျန်ခဲ့တယ်.. လိပ်စာရှာပြီး လာပြန်ပေးလို့ တစ်ပြားမှ မလျှော့ဘဲ ပြန်ရတယ် ဆိုပါတော့ကွယ်.. အဲ့နောက်မှာ စကား စပ်မိကြရင်း ကိုယ့်စားရိတ်လေး ကိုယ်ရှာပြီး ပညာသင်နေတဲ့ကလေး ဆိုတာ သိသွားတော့ အန်တီ့ ညနေဘက် ကျူရှင်တွေ ဆရာလည်း လိုက်ပို့ဘို့ မအားရင် သူ့ကား လှမ်းခေါ်သုံးဖြစ်တယ်.. ဆရာတို့ အပေါင်းအသင်းတွေ စားကြသောက်ကြရင်လည်း သူ့ပဲ ပို့ခိုင်း ကြိုခိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးသွားတယ် ဆိုပါတော့ကွယ်.. နောက်တော့ သူတို့ အတူ စုငှားနေတဲ့ အိမ်ကလေးကို ပိုင်ရှင်က ရောင်းလိုက်တယ် ဆိုလား.. အဆောင်နေဘို့ စုံစမ်းနေတယ်
ဆိုတာနဲ့ ဆရာက လွတ်နေတဲ့ ဂိုဒေါင်နောက်က အခန်းလေးကို နေပါစေ ဆိုပြီး ပေးထားလိုက်တာ.. ကောင်လေးက တော်ရှာပါတယ်.. အန်တီနဲ့ ဆရာက တူလိုသားလို ဆက်ဆံပေမယ့် အနေအထိုင် အရမ်း တတ်တယ်.. သူ အငှားမောင်းနေတဲ့ ကားက ရောင်းမယ်ဆိုပြီး စပေါ် ကိစ္စတွေ အရှုပ်အရှင်း ဖြစ်တာတောင် အန်တီတို့ ကူညီတာ သူ လက်မခံဘူး.. တစ်ခု ဆိုးတာက သူ့ အကြောင်း ဘာဆို ဘာမှ မပြောတာပဲ.. အန်တီလည်း အစက ၀ရမ်းပြေး ဘာညာ ဖြစ်နေမှာ စိုးမိသေးတာ.. ဒါပေမယ့် လူ့စရိုက်က
နေရင်းနဲ့ ကြည့်လို့ ရတယ်လေ.. ကောင်လေးက လူအေးပါ.. အခု ကိစ္စကတော့ အန်တီရော
ဆရာရော နားကို မလည်တာ.. ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်သွားမှန်းမသိ ဆက်သွယ်လို့လည်းမရ.. ရဲတိုင်ရမလား.. သတင်းစာထဲ ထည့်ရမလား.. စဉ်းစားပြန်တော့လည်း ကလေးပေါက်စမဟုတ်.. ကိုယ့်အိမ်ကလည်း ဘာမှ မပျောက်.. အိမ်မှာ အဆောင်လာနေသလို ပုံစံထက်ပိုပြီး ဘာမှလည်း သူ့အကြောင်း မသိဆိုတော့ သမီးရယ်.. သမီး ဆရာကတော့ ဒေါလည်းပွ၊ စိတ်လည်းပူပေါ့.. သံယောဇဉ်ကလည်း ရှိနေတော့လေ..”ရှည်လျားစွာ ရှင်းပြလိုက်သည့် အန်တီ့စကား အဆုံးတွင် ပြန်မရနိုင်တော့သည့် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကို ဖွေး ကောင်းကောင်း ခံစားမိလိုက်ရသည်။ ပြင်ဦးလွင်အထိ လိုက်ရ ကောင်းမလား ဟူသော အတွေးကိုတော့ ဖွေး အကောင်ထည် မဖော်ဖြစ်ခဲ့။ သည်အတိုင်း ဆိုပါလျှင် စူးရှနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိ သိထားတာတွေ အားလုံးက အမှန်ဟုတ်ပါ့မလား။ တကယ်လို့များ မိမိ ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်လေးသည် လူငယ်တစ်ဦး၏ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်နေခဲ့မည်ဆိုပါလျှင် သည်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီး သူစိမ်းယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို အိပ်ခန်းထဲအထိ ခေါ်ကာ မိုက်မဲစွာ ပါတ်သက်မိသည့် မိမိ အဖြစ်က….။ထိုညက ဖွေး ငို ခဲ့သည်။ ခါတိုင်းကဲ့သို့ နာကျည်းမှု ၀မ်းနည်းမှု တစ်ခုခုကြောင့် မျက်ရည် ကျရုံ သက်သက်မဟုတ်ပါဘဲ နင့်သီးစွာ ငိုရှိုက်ခဲ့ပါသည်။ တဆစ်ဆစ် နာကျင်နေသော ရင်ထဲတွင် ဘာမှ မကျန်တော့အောင် မျက်ရည်များနှင့် မျှောချခဲ့သည်။ အချစ် ဆိုသော စကားလုံးကို ရှိုက်သံများနှင့် မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ နောက်နေ့မနက်တွင် မေမေ့ထံသွားကာ ဖွေး အနာဂတ်အတွက် မေမေ စီစဉ်သမျှ နာခံမည်ဟု ကတိပေးလိုက်တော့၏။ လဲပြိုလုလု ဖြစ်နေသော မေမေ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွေး လက်ဖြင့် ပြန်လည် ဦးမော့ လာစေရမည်။ နှင်းဖွေးဖွေးကို အထင်အမြင် သေးသူအားလုံး နှင်းဖွေးဖွေး၏ ရှေ့မှောက်တွင် အမှန်တကယ် ဦးညွှတ်လာရမည်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်သင်ဆရာဝန် ပြီးလျှင် မြန်မာပြည်တွင် ပိုစ့်တင် မ၀င်ဘဲ နိုင်ငံခြားတွင် ပညာ ဆက်သင်လိုသော သင်းသင်းမွှေးတို့ လင်မယား၊ သူတို့နှစ်ဦးလုံး၏ တစ်သက်တာ ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် ထာဝရ လေးစားနေရမည့်သူများထဲတွင် မိမိလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ရမည်။ နောက်ဆုံး ချစ်ရသည့်မေမေ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသ၍ စနေသမီး နှင်းဖွေးဖွေးသည် အားကိုးရသော သမီး၊ လိမ္မာ သိတတ်သောသမီး၊ မိဘ လက်နှင့် မြှင့်တင်ပေးသော ရွှေပုံပေါ်တွင် စံနေသည့် သမီး ဖြစ်ရမည်။သည်လို အခွင့်အရေးတွေ ရဘို့ အရိုးခံ အခြေအနေအတိုင်း ကြိုးစားဘို့ဆိုတာ မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်။ အထူးသဖြင့် မေမေ့ ကျန်းမာရေးအပါအ၀င် မိမိ မျက်စိရှေ့တွင် မြင်နေရသည့် အခြေအနေအားလုံးက ယိုင်လဲနေပြီမဟုတ်ပါလား။ သည်လို အချိန်မှာ မိမိက ခေါင်းမာ ပေကပ်ပြီး ကိုယ့်အားနှင့်ကိုယ် ကြိုးစားပြနေလည်း မည်သို့မျှ
မလွယ်တော့။ မချိမဆန့် ရုန်းကန်နေရမည့် အနေအထားကို ရောဂါသည် မိခင်က ရင်မောစွာ မြင်နေရဦးမည်။ အနည်းဆုံးတော့ မေမေ့ ကျန်းမာရေး အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိ ဘ၀တစ်ခုလုံး ရင်းရသည်မှာ အရှုံးမရှိဟု ဖွေး မြင်မိသည်။ ဒါကမှ တကယ့် လက်တွေ့ဘ၀ မဟုတ်ပါလား။ ဘယ်ကလာလို့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိသည့် ယောင်္ကျား တစ်ယောက်အပေါ်တွင် စုပြုံကျရောက်နေသော သောက်သုံးမကျသည့် အချစ် ဆိုတာကြီးက တကယ်တမ်း မိမိ လက်တွေ့ဘ၀ အမြင့်ရောက်ဘို့ ဘာမှ အသုံးမ၀င်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘ၀တွင် ဂုဏ်သရေရှိ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးတစ်ခု၏ သတို့သမီးအဖြစ် တောင်းဆို ကမ်းလှမ်း ခံရခြင်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာကောင်း တစ်ရပ် ဟု
ပြောမည် ဆိုပါလျှင် ငြင်းသူရှိလျှင်တောင် နည်းပါလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင် နောက်ပြန်လှည့်၍ မရသည့် လမ်း ဆိုသော်လည်း မေမေ့ နောက်ဆုံး အချိန်များကို အပြုံးနှင့်သာ မြင်ရမည် ဟူသော အခြေအနေ တစ်ခုတည်းနှင့်ပင် သည်လမ်းကို ရွေးဘို့ ဖွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့၏။ ဒါက မိမိဘ၀အတွက် စူးခင်းသော လမ်း မဟုတ်.. စူးညှောင့် ခလုတ်ကင်းသော စိန်စီသည့်လမ်း ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။ နေခဲ့တော့
စူးရှ.. ငါ့ ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင် စူးခဲ့ပြီးပြီ.. ငါ့ အသည်းတွေ ဒဏ်ရာဗရပွနဲ့ အက်ရှ ခဲ့ပြီးပြီ.. ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်.. ချစ်သလောက်လည်း မုန်းတယ်.. ဘာလို့လဲ သိလား.. ငါ ကျေနပ်တဲ့အထိ ငါ့ကို ပေးဆပ်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့နင်က.. ငါ တကယ်အလိုအပ်ဆုံး အချိန်မှာ ငါ့ကို ထားခဲ့တာလေ.. နင့်လိုကောင်က.. နင့်လို သောက်သုံးတစ်စက်မှ မကျတဲ့ လမ်းပေါ်က ကောင်က ငါ့ကို ထားခဲ့တာ.. ငါ့ အမိန့် မရဘဲ ငါ့နားကနေ ထွက်သွားခဲ့တာ.. သိလား စူးရှ.. နင်က ငါ့ ဘ၀မှာ အချစ်ရဆုံးနဲ့ အမုန်းရဆုံး တစ်ဦးတည်းသော ယောင်္ကျားပဲ..
“တီ… တီ…”အိမ်ရှေ့ဆီမှ ကားဟွန်းသံကြောင့် ဖွေး အတွေးတို့ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ၀ရန်တာမှ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အိမ်တွင်း အလှဆင်သည့် အဖွဲ့။ ဖွေး လက်ထပ်ရမည့် သတို့သားလောင်း၏ မိဘများက မွှေး မင်္ဂလာပွဲ အတွက် တိုက်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း လက်ဖွဲ့သည်။ မေမေ့ အပြောအရ ကောင်းမြတ်နှင့်လည်း ဆွေမျိုးနီးစပ် တော်ကြောင်းသိရ၏။ ငွေကြေးအနေအထားခြင်း ယှဉ်လျှင်တော့ ဖွေး၏ ယောက္ခမလောင်းများက ကောင်းမြတ်၏မိဘများထက် အများကြီး သာသည်ဟု ဆိုသည်။ သည်တစ်ချက်ကလည်း ဖွေး အနေနှင့် သည်လူကို လက်ခံဘို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းများအနက် တစ်ခု အပါအ၀င်ပင်။ မေမေတို့ ငွေဆောင်မှ ပြန်လာပြီးလျှင် သူနှင့် ဖွေး တွေ့ကြရန် စီစဉ်ထားပြီးပြီ။ ဖွေး ဆန္ဒကို အလေးအနက်ထားသော မေမေက လူငယ်ချင်း အရင် ရင်းနှီးမှု ယူနိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးထား၏။ တစ်ဘက်မှလည်း မေမေ့ စကားကို လက်ခံပုံရပါသည်။ မင်္ဂလာပွဲ
နေ့က ယောက္ခမလောင်း အန်တီကြီးနှင့် ဖွေး တွေ့ရသည်။ သဘောကောင်းပြီး တည်ငြိမ်သော စိတ်ထားရှိပုံရသည့် သူဌေးမကြီးက ဖွေး ကို နွေးထွေးနှစ်လိုစွာ ဆက်ဆံပါသည်။ မေမေ့ကိုလည်း ညီအစ်မရင်းသဖွယ် ခင်မင်ပုံရ၏။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အတော်လေး နေမကောင်းသည့်ကြားမှ သည်မင်္ဂလာပွဲကို လာရောက်ချီးမြှင့်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မကြာမီ အချိန်အတွင်း နောက်ထပ် မင်္ဂလာတစ်ခု မျှော်လင့်မိကြောင်း
မေမေ့ကို ပြောသွား၏။ အန်တီကြီး၏ အမူအရာက ခန့်ထည်လှသော်လည်း မေမေ့အပေါ် စီးစီးပိုးပိုး နိုင်ခြင်းမျိုး လုံးဝ မတွေ့ရပါ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိ အိမ်ထောင်ဘက်လောင်းလျာက မိမိ မိသားစုကို အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့နိုင်သူ ဖြစ်နေခြင်းကိုတော့ ဖွေး အတိုင်းမသိ ကျေနပ်မိသည် အမှန်ပင်။ ဖွေး ခြံတံခါးဝသို့ ရောက်တော့ ကားပေါ်မှ လူတစ်ဦး ဆင်းလာသည်။ “အမ.. ဒါ ကိုကောင်းမြတ်တို့ အိမ်လား မသိဘူး..”“ကိုကောင်းမြတ် အိမ်မဟုတ်ဘူး.. ကိုကောင်းမြတ် မိန်းမ အိမ်..”“ခင်ဗျာ..”“အခန်း ဒက်ကရေးရှင်းလုပ်ဘို့ မဟုတ်လား.. လုပ်မယ့် အခန်းက (…) မှာလေ..”“ဟုတ်တယ်
ခင်ဗျ.. ကျွန်တော်တို့ ရောက်သွားတော့ အခန်းက သော့ခတ်ထားတယ်.. ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့ ကိုကောင်းမြတ်က ပစ္စည်းတွေ သည်ကို ပို့ထားပေးပါဆိုလို့..”“ကိုယ့်ရုံးကိုယ် ပြန်သယ်သွားလိုက်ပေါ့.. စ အပ်ကတည်းက ဘယ်နေ့ စ မယ်လို့ ချိန်းမထားဘူးလား.. အံ့သြတယ် တကယ်ပဲ..”“ပစ္စည်း
ဆိုပေမယ့် မများပါဘူးအမ.. ကျွန်တော်တို့က အဲကွန်း အဖွဲ့ပါ.. လောလောဆယ် အဲကွန်း အရင်တပ်မယ်ဆိုလို့.. အဲကွန်းနဲ့ မီးကြိုး၊ ထရန်ကင်းပြား ဘာညာလောက်ပါပဲ.. ပြန်သယ်တာက ရတော့ရတယ်အမရယ်.. ကျနော်တို့ တခြားနေရာတွေ သွားရဦးမှာမို့လို့.. ပြန်မလှည့်ချင်လို့ပါ.. တောက်လျှောက် သယ်သွားဘို့ ကျတော့လည်း..”“ကဲပါ.. ၀င်.. ထားခဲ့လိုက်..”“ဟုတ်ကဲ့အမ.. ကျေးဇူးပါ..”“နောက်ထပ်တော့ ဘာမှ လာမပို့နဲ့နော်.. သူတို့ပြန်ရောက်ပြီဆိုမှ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ကြ..”“ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ..”ပစ္စည်းများက
သိပ်မများလှသည်မို့ ဧည့်ခန်းထဲတွင်ပင် နံရံထောင့်ကပ်ကာ ချခိုင်းထားလိုက်သည်။ အလုပ်သမား အဖွဲ့ပြန်သွားတော့ မနက်ကလေးစာ အတွက် ဘာမှ မစားရသေးသည့် မိမိအစာအိမ်က အချက်ပေးလာပြီမို့ မီးဖိုချောင် ၀င်ကာ ရေခဲသေတ္တာဖွင့်လိုက်၏။ အထဲတွင် ဘီယာဗူးများနှင့် ပြည့်နေသည်။ မင်္ဂလာဦးညက ကောင်းမြတ်နှင့် အပေါင်းအပါတစ်စု၊ အိမ်တွင် သောက်ကြ စားကြသေးသည်လေ။ ဘီယာဗူးများကို ကြည့်ပြီး ဖွေး လက်လှမ်းလိုက်သည်။ တစ်ခါမှ သောက်မကြည့်ဘူးသည့် အရသာကို သိချင်လာ၏။ စိတ်ညစ်လျှင် အရက်သောက်ကြသည်ဟု ကြားဖူးသည်။ ဘီယာက အရက်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ခါမှ မသောက်ဖူးသေးတဲ့ မိမိအတွက်တော့ ခံစားချက် တစ်ခုခုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာ သေချာ၏။ ဘီယာ
သုံးဗူးနှင့် ကြောင်အိမ်ထဲမှ အာလူးကြော်ထုတ်များယူပြီး အပေါ်ထပ် မိမိ အိပ်ခန်းသို့ ပြန်လာလိုက်သည်။ မူးအောင် သောက်ပစ်မည်။ ဆဲချင်စိတ်ပေါ်လာလျှင် အော်ဆဲပစ်မည်။ အိမ်တွင် မိမိတစ်ယောက်တည်း။ မိမိတွင် ဂရုစိုက်ရမည့်သူ မရှိသလို မိမိကို လာဂရုစိုက်မည့်သူလည်း မရှိ။ လူတစ်ယောက် ဘ၀တွင် မွန်းကျပ်နေသည့် စိတ်ကို အကြီးအကျယ် လွှတ်ချပေးဘို့ နေ့တစ်နေ့ သို့မဟုတ် နည်းလမ်းတစ်ခုလောက်တော့ ရှိသင့်သည် မဟုတ်ပါလား။ ဒီသုံးလေးရက် ပြီးလျှင် မိမိဘ၀ လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားမည့် လမ်းတစ်ခုကို လျှောက်ရတော့မည်။ နံနက် အိပ်ရာ နိုးသည်မှ ည အိပ်ရာဝင်ချိန် အထိ စက်ရုပ်တစ်ခုလို ရှင်သန်ရတော့မည်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ရှင်သန်ခဲ့သော ဘ၀တစ်ခုကို နိဂုံး ချုပ်ရတော့မည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အောင်မြင်မှု၊ ရှုံးနိမ့်မှု စသည့်စသည့် လူဖြစ်ရသော ဒုက္ခများကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ရတော့မည်။ နှလုံးသားက ရွေးချယ်သူ မဟုတ်သည့် ဘ၀ အဖော်အတွက် မိမိသွေးသား၊ မိမိ အချိန်၊ အရာရာကို ပေးဆပ်ရတော့မည်။အားပါးတရ ငုံလိုက်မိသည့် ဘီယာ အရသာက ပါးစောင်ထဲ ခါးတူး ချဉ်စုတ် လွန်းလှ၏။ ဖွီးးးကနဲ ပြန်ထွေးထုတ်ပြီး လက်ထဲမှ ဘီယာဗူးကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ ဒီလောက် ပူလောင်ခါးနံနေတဲ့ ပူခါးနံ အရသာကြီးကို ဘာလို့ ကြိုက်ကြတာပါလိမ့်။ ဒါလည်း မိုက်မဲခြင်း တစ်မျိုးပဲလား..။ သည်ကဲ့သို့ ဆိုပါလျှင် မိမိကကော..။ ဘယ်ကလာလို့ ဘယ်ကို သွားမှန်းမသိသည့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်၊ တကယ်တမ်း မိမိ လက်တွေ့ဘ၀အတွက် ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်သည့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်၊ မိမိ ၀မ်းနည်း အားငယ်နေရသည့် အချိန်တွင် မိမိနား မရှိသည့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်၊ သည်လို ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို
တွယ်တာမက်မောနေသည့် မိမိက ဘီယာခါးခါးကို နှစ်သက်သော သူများထက်ပင် ပို မိုက်နေသေးသည် မဟုတ်ပါလား။ အိပ်မက်သာ ဖြစ်သင့်သည့် ကိစ္စတစ်ခုကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးသည့် နှင်းဖွေးဖွေး၊ နောက်ထပ် ဘီယာ တစ်ငုံကို ကျိတ်မှိတ်
မြိုချလိုက်သည်။“အာားးး.. ရှီးးးး..” ပူလောင် ခါးသက်သည့် အရသာက လည်ချောင်းတစ်လျှောက် ဆင်းသွား၏။ အ၀င်က သက်တောင့်သက်သာ သိပ်မရှိလှသော်လည်း ပထမ တစ်ငုံလို ထွေးမထုတ်မိ။ ၀မ်းဗိုက်ထဲထိ ပူဆင်းသွားသည့် ဘီယာ ခါးခါး၏ အရသာကို နောက်တစ်ငုံ ထပ် ခံစားကြည့်ရင်း မဲ့ ပြုံး ပြုံးမိသည်။ ဟက် ကနဲ တစ်ချက်ရယ်ရင်း စားပွဲပေါ်ရှိ လက်ပ်တော့ပ် လေးကို ဖွင့်လိုက်၏။ သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက် အော်ဟစ် ဆိုလိုက်ချင်သည့် အာသီသကြောင့် သီချင်းလေးတွေ ကူးထားသည့် ဖိုလ်ဒါ လေးကို ဖွင့်၊ အရင်ဆုံး နှိပ်လိုက်မိသည့် သီချင်းက ခုတလော နေ့တိုင်းနီးပါး နားထောင်နေမိသည့် Just Give Me A Reason. မိမိ အကြိုက်ဆုံး အပိုဒ်လေးရောက်တော့ စက်မှ တေးသံနှင့်အတူ လိုက်ဆိုရင်း ပေါက်ကွဲ
ခံစားမိလိုက်သည်။“♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ Just give meareason. Justalittle bit's enoughJustasecond we're not broken just bent. And we can learn to love again ♬ ♬ ♬♬ ♬ ♬ It's in the stars. It's been written in the scars on our heartsWe're not broken just bent. And we can learn to love again…♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬”"တစ်ကယ်ပဲ
နင်နဲ့ငါ အပြီး ခွဲကြရပြီလား စူးရှ.. ငါ ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းက နင်နဲ့ လုံးဝ ပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့ လမ်းခွဲတစ်ခုလား.. ဒါမမဟုတ် ခဏလေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားရုံ လမ်းကွေ့ တစ်ခုလား.. ငါ့ နှလုံးသားမှာတော့ သေရာပါမယ့် ဒဏ်ရာတစ်ခု တကယ်ဖြစ်သွားပြီ.. နင့် ရင်ထဲမှာရော ငါ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ခံစားချက်မျိုး ပါသွားလဲ.. တကယ်တမ်း အချစ်ရဲ့ အရသာက ဘာလဲ.. ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်ဆိုတာ ရှိရော ရှိလိုက်ရဲ့လား.. တကယ်က အဲ့သည် အချစ်ရဲ့ ဆန်းကျယ်မှုတွေကို ငါတို့အတူ သင်ယူလို့ ရတယ်လေဟာ.. အဲ့ဒါကို နင်က ဘာလို့.."ရင်ထဲမှ တဆစ်ဆစ် နာကျင်မှုက ဘီယာတစ်ဗူးလုံး ကုန်သွားသည့်တိုင် ပျောက်မသွား။ လူက မူးနောက် ရီဝေလာခြင်းသာ အဖတ်တင်၍ ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာက လုံးဝ လျော့မသွားတာ သေချာပါသည်။ တစ်ခုတော့ သိသလိုလို ရှိသည်။ မျက်ဝန်းများမှ ဆည်တမံ ကျိုးသလို မျက်ရည်မိုး ရွာနေမိသော်လည်း ဖွေး
အော်ရယ်နေမိ၏။ ဘီယာဗူး နောက်တစ်လုံးကို လက်လှမ်းလိုက်သည်။ ထပ်သောက်ဦးမည်။
ဘာမှ မသိတော့လောက်အောင်၊ မှောက်ကျ သွားပြီး အိပ်ပျော်သွားအောင် အထိကို သောက်ဦးမည်။ ဒုတိယမြောက် ဘီယာဗူး၏ ပထမဆုံး တစ်ငုံ။ သည်တံဆိပ် သည်အမျိုးအစား ဖြစ်သော်လည်း စောစောက တစ်ဗူးလောက် မခါးတော့တာ သေချာ၏။ "တစ်ခါပါပဲ..
ဘယ်ကိစ္စမဆို ပထမဆုံး တစ်ခါကပဲ ခက်တာပါ.. ဟာ ဟ.. ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား စူးရှ.. နင် ဆိုတဲ့ အစုတ်ပလုတ် ကလေကချေ လမ်းဘေးက ကောင်ကို ငါ သည်လောက် တွယ်တာမိတာ တခြားကြောင့် လုံးဝ မဟုတ်ဘူး.. နင်က ငါ့ ဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံး ယောင်္ကျား ဖြစ်နေလို့.. သိလား.. နင့်နေရာမှာ တခြားလူဆိုလည်း ငါ ခုလို တွယ်တာမိမှာပဲ..
ဒါက ငါ့ဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံကို တွယ်တာတာ.. နင့်လို သူများအိမ်မှာ ကပ်နေရတဲ့ သူတောင်းစား သာသာ အကောင်ကို တွယ်တာတာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး.. နင် သဘောပေါက်လိုက် စူးရှ.. တကယ်တော့ နင်က ငါ့အတွက် ဖိနပ်တစ်ရံလောက်တောင် အဆင့်မရှိ၊ တန်ဘိုး မရှိတဲ့ကောင်.."နောက်တစ်ငုံအတွက် လက်ရွယ်နေတုန်း အိမ်ရှေ့ ခြံဝန်းတံခါးမှ ဘဲလ်သံ ကြားလိုက်ရပြန်သည်။ ဖွေး စိတ်ရှုပ်သွား၏။ ဟို အဲကွန်းအဖွဲ့ ဆိုတဲ့ ကောင်တွေပဲနေမှာ.. ဘာမှ လာထပ်မထားပါနဲ့ ဆိုတာကို သောက်ဇယားရှုပ်တဲ့ဟာတွေ.. တွေ့မယ်.. ငါ့ အကြောင်းသိမယ်..။ တောက် တစ်ချက် ခေါက်ရင်း လက်ထဲမှ သောက်လက်စ ဘီယာဗူးကို ချကာ ခြံဝဆီ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ လူက ရီဝေ မူးနောက်နေသော်လည်း ခြေလှမ်းများက
ပြောလောက်အောင် ယိုင်မနေပါ။ ခြံရှေ့တွင် ဘာကားမှ ရပ်ထားခြင်း မရှိ။ ဘယ်က သူတောင်းစား၊ အိမ်ရှေ့ ဘဲလ် လာတီးတယ် မသိဘူး။ ခေါင်းပေါ်မှ ဆံပင်များကို လက်ချောင်းများဖြင့် ထိုးဖွလိုက်မိသည်။ စိတ်တိုတိုနှင့် ခြံဝန်း သံတံခါးကို
“စူးရှ…”ဘီယာက မိမိကို ယစ်မူးစေပါသည်။ သို့သော် မိမိရှေ့တွင် ခြေစုံရပ်နေသည့် ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ကို သူပဲဟု ထင်ရလောက်အောင်တော့ မိမိ မမူးသေးတာ သေချာ၏။ ဒါဆို တကယ်ပဲ သူပေါ့။ အပြာရောင် ဖြော့ဖြော့ ရှပ်အကျီနှင့် ကချင်လုံချည် ၀တ်ထားသည်။ အသားအနည်းငယ် ညိုသွားသယောင်ရှိပြီး မျက်နှာနည်းနည်း ချောင်သွားသည်မှလွဲ၍ လက်နှစ်ဘက်ကို နောက်ပစ်ကာ ခပ်ကိုင်းကိုင်း ရပ်နေသည့် သူ့ပုံစံ၊ ပြုံးတော့မလိုလို နှုတ်ခမ်းများနှင့် ရီဝေေ၀ မျက်လုံးများက သူမှ သူ အစစ်။ ရက်ပေါင်း (၇၀)ကျော် မိမိ နှလုံးသားကို
ဒုက္ခပေးခဲ့သည့် စူးရှ။ လုံးဝ ထင်မှတ်မထားသည့် အခြေအနေမို့ ဖွေး မျက်လုံးများ မူးနောက် ပြာဝေသွားသည်အထိ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။ လူက ရုတ်တရက် ကြောင်ငေးကာ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ။ ဘာစကားမှလည်း မပြောမိ။ စူးရှ.. ဖွေးကို ခပ်ယဲ့ယဲ့ အပြုံးဖြင့် ငေးကြည့်နေမိသည်။ ဖွေး အရမ်း ပိန်သွားတာပဲ။ မျက်နှာတွေ နီရဲပြီး ငိုများ ငိုထားသလား။ ခြေလှမ်း တိုးရွှေ့ကာ သူမနှင့် လက်တစ်ကမ်း အကွာဆီ တိုးကပ်သွားလိုက်၏။ မိမိကို စိုက်ကြည့်နေသည့် သူမ မျက်ဝန်းများက စူးရဲ တောက်ပဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ခါတိုင်းလို အားအင်များ ပြည့်မနေ။ မိမိဘ၀တွင် တွေ့ဖူးသမျှ မိန်းကလေးများနှင့် လုံးဝ မတူသည့် နှင်းဖွေးဖွေး၊ ဒေါသထွက်နေစဉ်တွင်ပင် လှနိုင်လွန်းသည့် သူမ မျက်နှာလေးကို သတိလက်လွတ် ငေးနေမိသည်။ စက္ကန့် အနည်းငယ် ကြာသွားသည် အထိ သူမ မိမိကို စိန်းစိန်းကြီး စိုက်ကြည့်နေဆဲ။ ငါ့ကို စိတ်ဆိုးနေလား ဖွေး.. နင် ငါ့ကို အရမ်း စိတ်ဆိုးမှာပဲ.. ငါ့ကို စိတ်ကြိုက် အပြစ်ပေးပါ ဖွေးရယ် နော်.. နင်ပေးတဲ့ အပြစ်တွေ ခံယူပြီးမှ ငါ နင့်ကို ပြောစရာရှိတာတွေ ပြောပြမယ်လေ။ လက်သီးကို ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ထားပြီး မေးကြောများ ထောင် ထ လာသည့်အထိ အံကျိတ်ရပ်နေသည့် ဖွေး။ မျက်လုံးများက အရောင်တလက်လက် တောက်ပကာ နှာသီးဖျားလေးက ရဲနေသည်။ ငါ သိတယ်.. နင် အရမ်း ကျေကွဲနေပြီမှန်း.. ဒါပေမယ့်
အဲ့ဒီဒေါသတွေ ငါ့ အပေါ် ပုံချလိုက်ပြီးရင် နင် ပျော်သွားမှာပါ.. နင်ပျော်အောင် ငါ လုပ်ပေးနိုင်မှာ သေချာပါတယ် ဖွေးရယ်..။“ဖွေး.. နေကောင်းရဲ့လား..”ဖြန်းးးးးးးးး…“ဟာ....”“…………..”“ဖွေး.. ငါ ရှင်း ပြ..”ဖြန်းးးးးးးးးး…“ဖွေး..”“ထွက် သွား..”“ဖွေး.. ခဏ.. ခဏလေး..”“ထွက် သွား လို့ ငါ ပြောနေတယ်နော်..”“ခဏလေး ဖွေးရယ်.. ငါ ရှင်းပြပါရစေဦး..”“ငါ့မှာ ဘာမှ နားထောင်စရာ မရှိဘူး.. နင် ဘယ်သူလဲ.. ဘယ်က ကောင်လဲ.. ခုချက်ချင်း ငါ့ မျက်စိရှေ့က ထွက်သွား..”“ဖွေးရယ်..
နင် စိတ်ဆိုးနေမယ်မှန်း ငါ သိပါတယ်.. ငါ့ကို ကြိုက်သလို လုပ်လေ နော်.. ရက်
ထပ်တိုးလေဟာ နော်.. ငါ့ကို အပြစ်ပေးမယ့်ရက် ထပ်တိုးလိုက်.. နော်..”“ထွက် သွားးး….. ခု ချက်ချင်း ထွက်သွားးးး….”ယောင်္ကျားတစ်ယောက်၏
ပါးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်ဖို့ ဖွေး ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မကူးခဲ့။ ခုတော့ သူ့မျက်နှာကို ချာကနဲ လည်ထွက်သွားသည် အထိ ဖွေး ရိုက်လိုက်မိသည်။ ပါးနှစ်ချက် ပိတ်ရိုက်ပြီးသည့်တိုင် မိမိကို ဇွတ်အတင်း တောင်းပန်နေသည့် စူးရှ။ သည်အခြေနေ ရောက်မှတော့ ဘာ ထူးဦးမှာမို့လဲ။ နင် ငါ့ကို တောင်းပန်လိုက်ရုံနဲ့ ငါ လျှောက်ရမယ့်လမ်းက ပြောင်းသွားမှာမှ မဟုတ်ဘဲ။ လှည့်ပြန်မည့်ပုံ မပေါ်သော သူ့မျက်နှာကို ဖွေး ဆက်မကြည့်ချင်တော့။ သည်ထက်လည်း ပို ပါတ်သက်ရန် စိတ်မရဲတော့။ မျက်စိစုံမှိတ်ကာ နားနှစ်ဘက်ကို ပိတ်ပြီး အော်လိုက်မိသည်။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက် ဖြစ်သည့်အပြင် လမ်းပေါ်တွင်လည်း အသွားအလာ ရှင်းနေ၍သာ တော်တော့၏။ သူ့ကို အော်ထုတ်ရင်း ခေါင်းကို တအားကြီး ရမ်းခါလိုက်မိသည်မို့ ဖွေး အာရုံထဲ မိုက်ကနဲ ဖြစ်သွား၏။ ဘီယာ၏ အရှိန်ကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ရုတ်တရက် ယိုင်သွားသည့် ဖွေး လက်မောင်းကို စူးရှ ထိန်းကိုင်လိုက်သည်။“ငါ့ အသားကို မထိနဲ့..”“ဖွေး.. နင် ဘီယာတွေ သောက်ထားတာလား.. ဟုတ်လား..”“နင့် အလုပ်လား.. ငါ့ဘာငါ ဘာသောက်သောက်ပေါ့.. နင်နဲ့ငါ ဘာဆိုင်လို့လည်း..”“အာ.. လာ.. အိမ်ထဲသွားရအောင်.. နော်..”“အောင်မာ..
အိမ်ထဲသွားရအောင် ဟုတ်လား.. ပြောပုံက.. နေစမ်းပါဦး.. နင်က ငါ့ကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ပြောရအောင်.. နင်က ဘာကောင်မို့လို့လဲ စူးရှ.. ဟမ်.. ဒီအိမ်ကရော နင့် အိမ်မို့လို့လား.. နင့်လို အိမ်မရှိရာမရှိ.. သူများအိမ် ကပ်နေရတဲ့ကောင်က ငါ့ကို ဆရာလာလုပ်နေတာလား.. ဟုတ်လား စူးရှ..”“အေးပါ.. ငါ မှားသွားပါတယ် ဖွေးရယ်.. ဒါမယ့် အိမ်ထဲတော့ သွားရအောင်လေ နော်.. ခြံပေါက်ဝကြီးမှာ မကောင်းဘူးလေ..”“နင် ဘာကောင်လဲ.. ဟမ် စူးရှ.. နင်က ဘာကောင်လဲ..”“ငါက နင့် ရဲ့ အပြစ်သားလေ နော်.. နင် ငါ့ကို ပိုင်တယ်.. ကြိုက်သလို လုပ်လို့.. ခိုင်းချင်တာ ခိုင်းလို့ ရတယ်လေ နော်..”“ကျွန်.. သိလား.. နင်က ငါ့ ကျွန်..”“အင်း အင်း.. ဟုတ်တယ်.. ငါက နင့် ကျွန်.. ငါ့ကို နင်ပိုင်တယ်.. ကျေနပ်နော် ဖွေး..”“ငါ နင့်ကို သတ်ပစ်ချင်တယ် စူးရှ.. သိလား..”“ဖွေးရယ်..”“………….”“………...”“လုပ်ဟာ.. သတ်ချင်သတ်.. နင် ကျေနပ်တဲ့ထိ ငါ့ကို လုပ်ချင်တာလုပ်..”“သေချာလား စူးရှ..”ဖွေး
မျက်လုံးများကို မှေးကျဉ်းပြီး သူ့ကို စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ မိမိကို တောင်းပန် တိုးလျှိုးနေသည့် သူ့ အကြည့်များက မိမိထံမှ ခွင့်လွှတ်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို ဆာလောင် မွတ်သိပ်စွာ မျှော်လင့် နေသယောင်။ ဖွေး ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း တုန်လာရသည်။ နာကျင်မှုနှင့် ပီတိကို တစ်ထပ်တည်း ခံစားနေရသလို ဖြစ်နေ၏။ မထွက်သွားသင့်သည့် အချိန်တွင် ထွက်သွားခဲ့သူ၊ ခုတစ်ခါ ပြန်ရောက်မလာသင့်သည့် အချိန်တွင် ရောက်လာပြန်သည်။ ပါးစပ်မှ အကြိမ်ကြိမ် နှင်ထုတ် နေမိသော်လည်း တကယ်တမ်း သူ ထွက်သွားမှာကို ဖွေး စိုးရိမ်မိသည်။ သည်တစ်ကြိမ် ထွက်သွားပြီးလျှင် မိမိတို့ ဘယ်သောအခါမျှ ပြန်ဆုံနိုင်တော့မည် မဟုတ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေရာ အချိန်အခါနှင့် အနေအထား အားလုံးက မိမိ ဘက်မှာ မဟုတ်လား။ လူတစ်ယောက် တစ်သက်မှာ တစ်ခါ မိုက်ဖူးခဲ့ကြစမြဲ ဆိုပါလျှင် ဖွေး ဘ၀ သက်တမ်းတလျှောက် သည်လို မိုက်မဲသည့် လုပ်ရပ်မျိုး တွေးတောင် မတွေးခဲ့ဖူးပါ။ နှစ်ဦးသား မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်နေမိသည်မှာ လက်တစ်ကမ်း အကွာ။ အချိန်အားဖြင့်လည်း မနက်စောစော၏ နေ၀န်းနီက ခွန်အား ပြည့်ရုံမက၊ အတော်အတန်ပင် အပူရှိန် မြင့်လာပြီ။ စက္ကန့်များနှင့် အပြိုင် ကုန်ဆုံးသွားသော အသက်ရှုသံ နှစ်ခုက လွန်သွားပြီးတိုင်း အသစ်အသစ် ပြန်ဖြစ်နေ၏။ သူ့မျက်လုံးများက ရီဝေ နေသည်။ နှုတ်ခမ်းများကို တင်းတင်းစေ့ရင်း မိမိ မျက်နှာကို မျှော်လင့်တကြီး စိုက်ကြည့်နေ၏။ မြင့်တက်လာသည့် ပါတ်ဝန်းကျင် အပူရှိန်နှင့်အတူ နှလုံးသား အတွင်းမှ အာသီသ အချို့၏ လောင်မြိုက်မှုကလည်း တရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာသည်။ အကယ်၍များ နှင်းဖွေးဖွေး ဆိုသော မိမိသည် မနက်ဖြန်မှ စ၍ ကျန်သော ဘ၀ သက်တမ်းတလျှောက်ကို
သမီးလိမ္မာ၊ ဇနီးလိမ္မာ တစ်ဦးအဖြစ် အသက်ထက်ဆုံးရပ်တည်သွားပါမည်ဟု ကတိပြုနိုင်မည်ဆိုပါလျှင် သည် တစ်နေ့လေး ကိုတော့ဖြင့်..။
“အခု ဒီအိမ်ထဲကို ရောက်နေတာ နင့်သဘောနဲ့ နင်နော် စူးရှ..”“………..”“ငါ ပေးမယ့် အပြစ်ကို ခံနိုင်ရည် မရှိလောက်ဘူးထင်ရင် ခုကတည်းက ပြန်လို့ရတယ်..”“………….”“နောက်တစ်ခု
ငါ ပြောထားဦးမယ်.. ဒီနေ့ နင့်ကို ငါ ပေးမယ့် အပြစ်က နင့် အတိတ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး စူးရှ.. နင့်ကိုငါ ပိုင်ထားပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ငါ့ ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ နင် ပျောက်သွားလို့..”“အဲ့ကိစ္စ.. ငါ ရှင်းပြ..”“မလိုဘူး.. ငါနင့်ဆီက ဘာ ကွန်ပလိမ်းမှ မလိုချင်ဘူး စူးရှ.. မကျေနပ်ရင် ပြန် ခု ချက်ချင်း..”တကယ်လည်း
ဖွေး ဘာမှ မသိချင်တော့ပါ။ သိလို့လည်း ထူးလာစရာ ဘာမှ မရှိပြီ မဟုတ်ပါလား။ စူးရှ ကြည့်ရတာ ချက်ချင်း ပြန် ဟူသော စကားကို အတော်လေး ခံရခက်ပုံပေါ်သည်။ ဖွေးက ပြန် ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် သူ့ပုံစံက ပြာပြာသလဲ ဖြစ်သွားတော့၏။ ခုလည်း ဖွေး အခန်းထဲတွင် လက်နောက်ပြန်ပစ်၍ မတ်တပ်ရပ်နေသည်။ တကယ်ပဲ ဆရာမတစ်ဦး၏ ရှေ့တွင် အပြစ်ခံယူတော့မည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် တူနေ၏။ သို့သော် မတူသည်က သည် ကျောင်းသားသည် ဆရာမ၏ အပြစ်ပေးမှုကိုသာ အလိုရှိပြီး ထွက်သွားတော့ ဟူသော စကားကို မကြားရဲခြင်းပင်။ “ဒူးထောက် ထိုင် စူးရှ.. နင့်ကို ဘယ်လို အပြစ်မျိုး ပေးရမလဲ ဆိုတာ ငါ စဉ်းစားဦးမယ်..”“………”စူးရှ
ရင်ထဲမှ သက်ပြင်းချလိုက်သော်လည်း အသံ မထွက်ရဲ။ မကျေနပ်လျှင် ထွက်သွား ဟူသည့် စကားကြီးကို သူ အင်မတန်ကြောက်ပါသည်။ သခင်မ၏ အမိန့် အတိုင်း ဒူးထောက်လျှက် ထိုင်လိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှလည်း လှုပ်ရှားတုန်ရီ နေမိ၏။ ဖွေး သူ့ကို ဘာများ လုပ်ခိုင်းဦးမည် မသိ။ နူးညံ့ ၀င်းမွတ်နေသော ခြေထောက်လှလှလေးများကို သူ လွမ်းသည်။ သူမ အလိုမကျတိုင်း စက်သေနတ်ပစ်သလို စကားများ နင့်သီးအောင် ပြောတတ်သည့် နှုတ်ခမ်းလေးကို လွမ်းသည်။ နောက်ဆုံး သူမ
ပေးခဲ့သည့် အဘိုးတန် ဆုလဒ် ကလေး၏ ပိုင်ရှင်၊ တနည်း ဆိုရလျှင် သူ့ အသွေးအသား၊ သူ့ အာရုံ အားလုံးကို လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းသည့် သခင်မ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အစိတ် အပိုင်းလေးကို လွမ်းသည်။ ဒူးထောက် ထိုင်နေသည့် မိမိရှေ့တွင် ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်နေသည့် သူမ။ ဒူးဖုံးရုံ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်လေးအောက်မှ ခြေသလုံးလှလှလေးတွေက စင်းပြီး ချောမွတ်နေ၏။ ခြေချောင်းလေးများတွင် စတော်ဘယ်ရီသီး ပုံလေးတွေ ဖော်ထားသည်။ ကော့ညွှတ်နေသည့်
ခြေမလေးကလည်း ကိုက်စားချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ချစ်ဘို့ ကောင်းနေ၏။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သူမ ခြေထောက် လှလှလေးများကို တစ်နေကုန်အောင် ငုံထားလိုက်ချင်ပါတော့သည်။ဒူးထောက်လျှက် ခေါင်းငုံ့ ထိုင်နေသည့် စူးရှကို မျက်လုံးထောင့်ကပ်ကာ ကြည့်လိုက်၏။ မိမိခြေထောက်လေးများကို တရှိုက်မက်မက် ငုံ့ကြည့်နေသည့် စူးရှ။ ဖွေးစိတ်ထဲတွင် ဖော်မပြနိုင်သော ခံစားချက်များ ရောထွေး ရှုပ်ပွနေသည်။ အလိုဆန္ဒများကလည်း တစ်ခုတည်းမက ဖြစ်နေ၏။
တထိတ်ထိတ် ခုန်နေသည့် ရင်ကို ငြိမ်အောင် ထိန်းလိုက်သည်။ ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်နေသည့် အာရုံတို့ကို တတ်နိုင်သလောက် စုစည်းလိုက်၏။ မိမိက အားရပါးရ ငိုပြီးသော်လည်း ဟိုနေရာလေးက ခုမှ မျက်ရည် ၀ဲလာနေသည်။ အရင်ဆုံး
နင့်ကိုငါ အပြစ်ပေးရမယ် စူးရှ.. သခင့် အမိန့် မရဘဲ ထွက်သွားတဲ့ ကျွန်တစ်ကောင်ကို အပြစ်ပေးရမယ်.. နာနာလေး ဆုံးမ ပေးရမယ်.. နောက်ထပ် ဒီအပြစ်မျိုး မလုပ်ရဲအောင်.. ဟင့်အင်း မဟုတ်ဘူး.. နောက်ထပ်ဆိုတာက နင်နဲ့ ငါ့ကြားမှာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. ဒီတော့ နင့်ကိုငါ တစ်သက် မမေ့နိုင်တဲ့ ခံစားမှုတွေ ဒီတစ်ရက်တည်း အပြီးပေးမယ်.. “လုံးဝ မလှုပ်နဲ့နော်.. ငါ ပြန်လာခဲ့မယ်..”ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောပြီး
ဧည့်ခန်းဆီ ထွက်လာခဲ့သည်။ ပန်းအိုးတင်ထားသည့် ဆိုဒ်တေဘယ်လ် လေး နဘေးတွင် စောစောက အဲကွန်းအဖွဲ့ လာထားသွားသည့် ပစ္စည်းများ ရှိနေ၏။ မီးကြိုးတပ်ဆင်ရာတွင် သုံးသည့် ထရန်းကင်းပြား ဖြူဖြူလေးတစ်ခုကို အစည်းထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ လေးထောင့် ပိုက်လို ဖြစ်နေသည့် ထရန်းကင်းပြားလေးကို ကိုင်ပြီး မီးဖိုချောင်ဘက် သွားကာ မိမိလိုသော အရှည်ရအောင် ကပ်ကြေးဖြင့် ညှပ်လိုက်၏။ လေးထောင့် ပိုက်ပုံစံမှ နှစ် ခြမ်း ဆွဲခွာလိုက်တော့ စောင်းလေးနှစ်ဘက် ပေါ်လာသည်။ ဖွေး စိတ်တွေ လှုပ်ရှား မြန်ဆန်လာ၏။ လေထဲတွင် တစ်ချက် လွှဲကြည့်လိုက်သည်။ ဒီအပြားနဲ့ သူ့ကျောပေါ်ကို.. အိုးး.. ကောင်းတယ်..
စောင်းနှစ်ဘက် ပါနေတော့ တစ်ချက်ရိုက်ရင် အရှိုးရာ နှစ်ကြောင်း.. သိပ်ကောင်းတဲ့ ငါ့ အကြံပဲ..။စိတ်ကြိုက် လက်နက် ရပြီမို့ မီးဖိုခန်း
အတွင်း မျက်လုံးဝေ့ ကြည့်လိုက်သေးသည်။ စတိုဘီဒိုလေးထဲမှ သားရေကြိုး နှစ်ချောင်းကို ထုတ်လိုက်၏။ ထိပ်နှစ်ဘက်တွင် သံချိတ်ကောက်လေးများ ပါသည့် သားရေကြိုးများ။ မိုးရွာသည့်နေများတွင် အိမ်ခန်းအတွင်း အ၀တ်လှန်းရန် သုံးသည့် သည်ကြိုးလေးများက ဖွေး အတွက် အသုံးတည့် သွားပြန်သည်။ နောက်ဆုံး သူမ ထုတ်ယူလိုက်သည့် အရာက စာအုပ်ချုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အ၀တ်တိပ်(ပ်) အကြီးကြီးတစ်ခု။ နှစ်လက်မ အပြားလောက်ရှိသည့် သည်တိပ်(ပ်)က မွှေး ၏ စာအုပ်များချုပ်ရာတွင် သုံးသည်။ ယခုတော့ ကျွန်ကောင်လေးကို ချုပ်နှောင်ဘို့ သုံးမည်။ လိုအပ်မည်ထင်သည့် ပစ္စည်းများ ယူလာပြီး အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားတုန်ရီနေသော်လည်း မိမိ စိတ်ကူးများကို ကျေနပ်အားရနေမိသည့် စိတ်ကြောင့် လူက အတိုင်းမသိ ပျော်နေမိ၏။ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ ထောက်ထားသည့် ဒူးပေါ် လက်လေးတင်ကာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချနေသည့် ကျွန်ကလေးက မိမိကို ခေါင်းလှည့်မော့ကြည့်သည်။ လက်ထဲမှ ပစ္စည်းများကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ပါးစပ် ဟ သွား၏။“ချွတ် နင့် အကျီ..”“အွန်..”“လာပြန်ပြီလား သည် အွန်.. နင် နားပင်းနေလား.. ချွတ် အကျီ..”နားနား
ကပ်ကာ အကျယ်ကြီး အော်ပြောလိုက်သည့် ဖွေး အသံလှိုင်းက နားစည်ကို စူးကနဲ လာရိုက်သည်။ စူးရှ ကျောထဲ စိမ့်တက်လာ၏။ အသံကျယ်ကျယ် စူးစူးကြောင့်လား.. မီးတောက်နေသည့် သူမ မျက်ဝန်းများကြောင့်လား.. ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သခင်မ အလိုကျ အစွမ်းကုန်လိုက်လျောဘို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီ မဟုတ်ပါလား။ ရှပ်အကျီ ကျယ်သီးများကို တစ်လုံးချင်း ဖြုတ်ရင်း တကိုယ်လုံး ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်း ဖြစ်လာသည်။ မိမိဘ၀၏ ပထမဆုံး အမိန့်သံများ၊ အရင့်အရင် ကြားရဖူးသည်ထက် အဆ များစွာ ပြတ်သား လွန်းသည့် သည်အမိန့်သံများအောက်တွင် ဆေးမိနေသူ လူတစ်ယောက်လို စေညွှန်သမျှ နာခံနေမိသည်။ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်သွားသော သူ့ရှေ့တွင် သူမ ရပ်နေ၏။ သိပ်လှပြီး သူ့အတွက် လန့်စရာကောင်းသော မိန်းကလေး။ သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံး ထူအန်းပြီး ပေါက်ထွက်မတတ် ပူလောင်နေသည်။ နထင်ကြောများ တင်းနေအောင် ထောင်တက်လာသလို ပုဆိုးအောက် အတွင်းခံထဲမှ ညီတော်မောင်လည်း အကြောပေါင်း တစ်ထောင်စိမ့်တက်ကာ ရုန်းကန် စ ပြုလာ၏။
အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာသည့် ဖွေးကို စူးရှ ငေးကြည့်မိသည်။ လက်ထဲတွင် ပါလာသည့် ပစ္စည်းများက ဘာအတွက်မှန်း စဉ်းစားမရ။ စုံစီနဖာ ပစ္စည်းများကို ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး စားပွဲပေါ်မှ ဘီယာဗူးဆီ လက်လှမ်းလိုက်သည့် သခင်မ ဖွေး။ သူမ စိတ်တွေ ပေါက်ကွဲပြင်းထန်နေမှန်း သိသာလွန်းနေသည်။ ဘီယာတွေ နင်းကန် သောက်နေမယ့်အစား ငါ့ကိုသာ ရိုက်သတ်လိုက်ပါတော့ ဟု လှမ်းပြောရန် စိတ်ကူးမိ၏။
သို့သော် မိမိ ပြောလိုက်ပါမှ နင့် အလုပ်လား.. နင်က ဘာကောင်မို့လဲ.. မကျေနပ်ရင် ပြန် ခုချက်ချင်း.. ဤနှယ် စကားများသာ ကြားရမည်မို့ ဒူးထောက်လျှက်ပဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ထိုင်နေရတော့သည်။“ထ စမ်း..” သခင်မက လက်ထဲမှ ထရန်းကင်းပြားနှင့် မိမိကျောပြင်ကို ရွှပ်ကနဲ ရိုက်ရင်း အမိန့်ပေး၏။
ရိုက်ချက်က သိပ်မပြင်း။ ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်အနေနှင့် သည်ရိုက်ချက် အားလောက်က နာကျဉ်မှုလည်း စိုးစဉ်းမျှ မဖြစ်ပါ။ သို့သော် ထင်မထားမိသည့် အပြုအမူမို့ စူးရှ လန့်သွားမိသည်။ အသံမထွက်အောင် အံကျိတ်၍ သက်ပြင်းချမိ၏။ သည်နေ့အဘို့တော့ နွားတစ်ကောင်လို ကြိမ်တို့ပြီး အခိုင်းခံရဖွယ် ရသည်။ ဖွေး ရိုက်ချက်က ထိရုံ သာသာမို့ စူးရှ မည်သို့မျှ ဖြစ်မသွား။ ကြည့်ရတာ သည်တုတ်က မနာဘူးထင်တယ်.. ငါပဲ အားပျော့နေလို့လား.. တကယ်တမ်းကျတော့ ရဲဆေး တင်ထားတဲ့ ဘီယာကလည်း အလကားပါပဲလား.. ငါ ဘာလို့ လက်တွန့်နေမိပါလိမ့်..။ မိမိအပေါ် တင်နေသည့် ဒေါသဖြစ်စရာ ကိစ္စများကို ပြန်တွေးသည်။ နောက်ထပ် မရနိုင်တော့သည့် အခွင့်အရေးကို အလကား ဖြစ်မခံနိုင်။ လက်ထဲမှ ဘီယာ လက်ကျန်ကို မော့သောက်လိုက်သည်။ ပူလောင်ခါးသီးမှုများ ရင်ထဲစီးဝင်သွား၏။ ဘီယာဗူးခွံကို ပစ်ချလိုက်သည်။ မွှေးပွကော်ဇောများကြောင့် ဗူးခွံက သိပ်ဝေးဝေးသို့ လိမ့်မသွား။ နှဖူးပေါ်ရှိ ဆံစတို့ကို သပ်တင်ပြီး အမိန့်ပေးရန် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ငါ တွန့်ဆုတ် မနေတော့ဘူး စူးရှ.. ခုချိန်က ငါ့ဘ၀အတွက် ထင်ရာမြင်ရာ လုပ်ခွင့်ရဘို့ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး မို့လို့လေ..“ပုဆိုး ချွတ်ချလိုက်..”“ဟမ်..”“တောက်..”“…….”“စူးရှ.. ငါ ပြောနေတယ်နော်..”မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှေ့တွင်
ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းလျှက် ရပ်နေရသည်ကပင် သူ့အတွက် ထူထူပူပူ နိုင်လှပြီ။ ပုဆိုးချွတ်လိုက်လျှင် အတွင်းခံအောက်မှ မြင်မကောင်းအောင် ခုံးထနေသည့် ကောင်ကြီးကို သူမ မြင်သွားတော့မည်။ ခိုင်းသည့်အတိုင်း မလုပ်ပြန်လျှင်လည်း ထွက်သွားဟု နှင်ထုတ်ဦးမည်မို့ အတွန့် မတက်ရဲပြန်။ အေးစိမ့်နေသည့် အဲကွန်းခန်းထဲတွင် ချွေးစို့နေရသည့် မိမိ အဖြစ်က ရယ်ရမလို ငိုရမလို။ သူမ မျက်နှာကို ခပ်ငေးငေး ကြည့်မိတော့ အရောင်တောက်နေသည့် မျက်ဝန်းများနှင့် ဆုံသည်။ သည်အကြည့်၊ သည်မျက်နှာထားကို မြင်လျှင် ဆေးမိသူတစ်ဦးလို မေ့မော သွားတတ်သည့် မိမိစိတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် နားမလည်။ ပုဆိုး ခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်သော်လည်း လက်ထဲမှ ရုတ်တရက် လွှတ်မချဖြစ်သေး။
မျက်နှာပေါ်မှ ချွေးများကို ပုဆိုးနှင့် သုတ်ရင်း ချည်တုံ ချတုံ ဖြစ်နေသည့်
သူ့ကို မွှေး စိတ်မရှည်တော့။ “စူးရှ.. နင် ငါ့အချိန်တွေကို တမင် လာဖြုန်းနေတာလား ဟုတ်လား..”“အာ.. မ မဟုတ်ပါဘူး..”“မဟုတ်ရင်
ချွတ် ခုချက်ချင်း.. ရှက်သလိုရွံ့သလို လာလုပ်မနေနဲ့.. သူများရည်းစားကို လုပ်ချင်တာ လုပ်ခဲ့တုန်းက နင့်မှာေ_ာက်ရှက် ရှိခဲ့လို့လား..”မျက်လုံးများကို
စိုက်ကြည့်ကာ တလစပ် ပြောချလိုက်သည့် သူမ စကားတို့က သူ့ရင်ကို နင့်ကနဲ ရိုက်ခတ်သွားသည်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးဖြန်းဖြန်း ထ သွား၏။ ဟုတ်သားပဲ.. ငါက မကောင်းတဲ့ကောင်.. သည် အပြစ်ကျွေးကို ကျေအောင် မဆပ်နိုင်မချင်း ငါ့ရင်ထဲက စကားကို ဖွေးသိအောင် ငါ မပြောရဲဘူး.. ဒီတော့ ခုချိန်မှာ ငါ လုပ်သင့်တာက သူ့ပါးစပ်ကနေ ငါ့အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီ လို့ ပြောလာတဲ့အထိ သူကျေနပ်အောင် နေပေးဘို့ပဲမဟုတ်လား..။ မျက်စိ စုံမှိတ်ပြီး လက်ထဲမှ ပုဆိုးကို လွှတ်ချလိုက်သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ အောက်မှ ညီတော်မောင် ဗလပြနေပုံက မြင်လို့ပင်မကောင်း။ ခုံးကျော်တံတားကြီးတစ်ခုလို ခုံးထ နေသည့် ထိုနေရာကို လက်ဝါးနှင့် အုပ်ကာ ကာထားမိသည်။ ဖွေး မျက်နှာလေးကို မရဲတရဲ ခိုးကြည့်တော့ ပန်းဆီရောင် သမ်းနေသည့် သခင်မ၊ မျက်လုံးများမှေးစင်းကာ သူ့ကို ကြည့်နေ၏။ ခပ်မဲ့မဲ့ အပြုံးကို မထိတထိ ပြုံးရင်း သူ့အနား ကပ်လာသည်။ လက်ထဲမှ တုတ်ဖြင့် ပေါင်လည်ကို ဖြန်းကနဲ ရိုက်၏။ သည်တစ်ကြိမ်တော့ ပထမတစ်ချက်ထက် အားစိုက်လိုက်ပုံပေါ်သည်။ ထရန်းကင်းပြား၏ စောင်းနှစ်ဘက်ကြောင့် ရှေ့ဘက် ပေါင်အလည်တွင် အနီရောင် မျဉ်းကြောင်းလေးနှစ်ခု ခပ်ရေးရေး ပေါ်လာသည်။ ငယ်ပါကို လက်ဝါးနှစ်ဘက်ဖြင့် အုပ်ရင်း သူ ဒူးတုန် လာမိသည်။ အရိုက်ခံရတာက အနည်းငယ် နာသည် ဆိုရုံသာ ဖြစ်သော်လည်း သူမ ရိုက်ချက်၊ သည့်ထက်များ အပေါ်သို့ ရွှေ့လာပါလျှင် ပြဿနာ..။ နောက်တစ်ချက် ထပ်ရိုက်သည်။ ပထမ နေရာကိုတိတိကျကျ ထပ်ရိုက်လိုက်ခြင်းမို့ နည်းနည်း ပိုနာသွားသလို အရှိုးရာလေးလည်း ပို ထင်လာသည်။ စူးရှ ခြေနှစ်ချောင်းလည်း ဆတ်ကနဲ တွန့်သွားမိသည်။“ဘာ တွန့်တာလဲ.. နင်ယောင်္ကျား မဟုတ်ဘူးလား..”“ဟူးးး…”“နောက် ဆုတ်..”သည်စကားကိုပြောရင်း
တစ်ချက် ထပ်ရိုက်သည်။ စူးရှ တဖြည်းဖြည်း လန့်လာပြီ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖွေး မျက်ဝန်းများတွင် မြင်နေကျ အရှိန်အ၀ါတစ်ခုက ပတ်ဝန်းကျင်မှ နေမင်း၏ အပူရှိန်လို မြင့်သည်ထက် မြင့်လာသောကြောင့်ပင်။ ခြေတစ်လှမ်း နောက်ဆုတ်လိုက်တော့ စောစောက ကျွတ်ကျခဲ့သည့် ပုဆိုးက မိမိရှေ့တွင် ကွင်းလိုက်ပုံလျက် ဖြစ်သွားသည်။ ဖွေးက ထိုပုဆိုးကို ခြေထောက် လှလှလေးနှင့်
ကန်ထုတ်လိုက်၏။ ချွတ်ချထားသည့် အကျီနှင့် ရောပြီး ခြေထောက်နှင့် စိတ်ကြိုက် နင်းချေသည်။ ထို့နောက်မှ အခန်းထောင့်သို့ ခြေနှင့် ကန်ထုတ်လိုက်၏။ လုံးထွေး ကျေမွနေသော မိမိအကျီနှင့် ပုဆိုး အဖြစ်က မိမိကဲ့သို့ပင် သနားစရာ ကောင်းနေတော့သည်။ အတွင်းခံအောက်မှ ဟိုကောင်ကြီးကတော့ ဒေါသတကြီး ဖြစ်နေပြီ။ လှိုက်တက်လာသော ရမ္မက်ဇောတို့ကို မနည်းချိုးနှိမ်ချနေရ၏။ မင်း ဗလပြချင်နေတာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး ငါ့ကောင်.. ဟိုက သိသွားရင် သူ့ကြည့်ပြီး တောင်လာရမလားဆိုပြီး ကပ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ပစ်မှ ငါ မျိုးကန်း နေမယ်ကွ..။ သည်လို တွေးလိုက်မိကာမှပင် ညီတော်မောင်က အတွင်းခံအောက်မှနေ၍ အဆတိုးကာ အတွန့် တက်ပြနေတော့သည်။“နင့် လက်တွေ နောက်ပစ် စမ်း..”“အာ.. ဖွေး.. ဟို..”ရွှမ်းးးးးးးးး“ရှီးး.. အင်း အင်းပါ..”ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ချက်က
မိမိ စိုးရိမ်တကြီး အုပ်ကာထားမိသည့် နေရာတည့်တည့်။ လက်ဖမိုး နှစ်ဘက်သာ ခံမနေပါလျှင် ဘ၀က မတွေးရဲစရာ။ နောက်ဆုံးတော့ သခင်မ အလိုကျ လက်နှစ်ဘက်ကို နောက်ပစ်လိုက်ရ၏။ ဟင်းလင်း ပွင့်သွားသော ဟိုဟာကြီးက အတွင်းခံ ပြဲထွက်မတတ် ဖောင်းကားနေသည်။ ယောင်္ကျား ပီသလွန်းသော မိမိ ငယ်ပါကြီးအတွက် ဂုဏ်ယူရမည့်အစား
ရှက်စိတ်များ တနင့်တပိုး ၀င်လာတော့သည်။ စမာန်ထပြီးလျှင် အတန်အသင့် အာရုံပြောင်းရုံမျှဖြင့် ပြန်မကျတတ်သည့် သည်ကောင်ကြီး ထရန်းကင်းပြားနဲ့ပဲ တွေ့မလား.. ကပ်ကြေးနဲ့ပဲ အညှပ် ခံရမလား.. ဖွေး သည်လောက်တော့ မရက်စက်လောက်ပါဘူး.. သူ လုပ်သမျှ ငါ မငြင်းဘဲ နာခံရင် အဆင်ပြေမှာပါ..။ ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်နေသည့် အတွေးတို့ဖြင့် နာသွားသောလက်ဖမိုးကို တင်ပါးနှင့် ပွတ်နေမိသည်။ “အဲ့ လက်နှစ်ဘက်ကို နောက်ပြန် ယှက်လိုက်..”“…………”“အဲ့လို မဟုတ်ဘူး.. တံတောင်ဆစ်ကို ပြန်ကိုင်..နောက်ပြန် လက်ပိုက် ခိုင်းတာဟဲ့ ငတုံးရဲ့..”“……….”“အင်း.. ဟုတ်ပြီ အဲ့လို..”ပြောပြီး
ကုတင်ဆီသို့ လှည့်သွားကာ တုတ်ကို ကုတင်ပေါ်တင်၏။ မိမိဘက် ပြန်လှည့်လိုက်တော့ သူမ လက်ထဲတွင် တိပ်(ပ်) တစ်ခွေနှင့် ကပ်ကြေး ပါလာသည်။ ဘုရား ဘုရား.. ငါ ထင်တာ မဟုတ်ပါစေနဲ့..။ စူးရှတစ်ယောက် ဇောချွေးများ သိသိသာသာ ထွက်လာတော့သည်။ စိတ်ထဲတွင် တထိတ်ထိတ်နှင့်မို့ အသက်ပင် ပြင်းပြင်း
မရှုရဲ။ တည်ငြိမ်စွာ လှုပ်ရှားနေသည့် သခင်လေး ၏ ခြေလှမ်းများ မိမိနောက်ဘက်ဆီ ရောက်လာသည်။ လေပူတစ်ချက် ဟူးကနဲ မှုတ်ထုတ်ရင်း မျက်လုံးများကို စုံမှိတ်ထားလိုက်တော့၏။
ကျစ်လစ်သန်စွမ်းသော ယောင်္ကျားတစ်ယောက်၏ အ၀တ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဖွေးစိတ်တို့ကို တစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာအောင် ဆွဲဆောင်နေသည်။ နောက်ပြန်ပိုက်ထားသည့် သူ့လက်ဖျံနှစ်ခုကို တိပ်(ပ်)နှင့် တစ်ရစ်ချင်း ပတ်ပစ်လိုက်၏။ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး မိမိလုပ်သမျှ ငြိမ်ခံနေသည့် စူးရှ ပုံစံက အရုပ်လေးတစ်ရုပ်နှင့် တူနေသည်။ သို့သော် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသည်က သည့်အရုပ်လေး၏ နှလုံးခုန်သံများတွင် ရမ္မက်ဇောတို့ လှိုက်ဆူနေခြင်းပင်။ တိပ်(ပ်) ကပ်ထားသည့် အပေါ်မှ ထပ်၍တစ်ခါ သားရေကြိုးနှင့် ပတ်လိုက်သေးသည်။ ကြိုးအစွန်းနှစ်ဘက်ရှိ သံချိတ်ကောက်လေးနှစ်ဘက်ကို ချိတ်လိုက်ပြီးသည့်အချိန်တွင် မိမိ စိတ်ကြိုက် အနေအထား ရောက်သွားပြီ ဖြစ်၏။
ဘီဒိုထဲမှ အနက်ရောင် ခေါင်းစည်း ပုဝါလေးကို ထုတ်ပြီး သူ့မျက်လုံးများကို စည်းနှောင်လိုက်သည်။ မိမိထက် ခေါင်းတစ်လုံးနီးပါး အရပ်မြင့်သူမို့ လုပ်ရတာ သိပ်တော့မလွယ်။ သို့သော် ခဏအတွင်းမှာပင် စူးရှ ဆိုသော ကောင်ကလေးသည် မိမိလိုချင်သည့် မျက်စိမှိတ်ကြိုးတုပ် ခံထားရသော အပြစ်သားကလေး ဖြစ်သွားတော့၏။“နင့် အပြစ် နင် သိတယ်နော် စူးရှ..”“…….” စူးရှ ခေါင်း ငြိမ့်ပြသည်။“ငါ နင့်ကို ဆယ်ချက် တိတိ ရိုက်မယ်..”“သဘောပါ ဖွေး.. ကြိုက်သလို လုပ်ပါ..”“ဒူး ပြန်ထောက်..”အမိန့်သံတစ်ချက်ပေးရင်း တံခေါက်ကွေးကို ဖြောင်းကနဲ ရိုက်ချလိုက်၏။ စူးရှ အံကျိတ်ခံရင်း ချက်ချင်း ဒူးထောက်ပေးသည်။ “၁..”“အ..”“ဘာ အ လဲ.. နင် ယောင်္ကျား မဟုတ်ဘူးလား..”“ဟူးး..”“၂..”“ရှီးး..”“၃..”“၄..”“အင့်..”“နင်
ဘာကောင်လဲ ဟမ် စူးရှ.. သည် တုတ်က ဘယ်လောက်မှ မနာဘူး..ေ_ာက်ပိုတွေ လာလုပ်နေတယ် ဟုတ်လား.. နင့် အသံက ငါ့ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်တယ်.. နေဦး ဒီလောက်တောင် အသံထွက်ချင်တဲ့ကောင် နင့်ပါးစပ်ကို ဆို့ထားမယ်..”သူမ ရိုက်ချက်များက ပြင်းထန်သလို နေရာလည်း ရွေ့မသွား။ ကျောပြင် တစ်နေရာတည်းကို အားထည့်၍ လွှဲရိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ ဘ၀တွင် မှတ်မိသလောက် အရွယ်မှ စ၍ တစ်ကြိမ်မျှ ဤသို့ အရိုက် မခံရစဖူး။ ယခုလည်း နာလွန်း၍ အော်ညည်းမိခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ လေသံသဲ့သဲ့မျှ ထွက်မိသည်ကိုပင် ကြံဖန် အမျက်ရှနေသည့် သခင်မလေးက သူ့ပါးစပ်ကို ဆို့ထားမည် ဆိုပြီး ဘာတွေ လုပ်နေသည်မသိ။ မျက်လုံးများကလည်း အ၀တ်မည်းနှင့် ကြပ်နေအောင် အစည်းခံထားသည်။ အာရုံထဲတွင် ပြာသွားလိုက် လင်းသွားလိုက်နှင့် ဒုက္ခ မျိုး စုံနေတော့၏။ စက္ကန့် အနည်းငယ်မျှ အကြာတွင် မိမိ ပါးစပ်ထဲသို့ တစ်စုံတစ်ရာ ထိုးထည့်ခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ အကြောပေါင်းတစ်ထောင့် စိမ့်တက်သွားပြီး လူက ဓာတ်လိုက်သလို တုန်ရီလာတော့၏။ အောက် မှ အငယ်ကောင်လည်း ဆီးခုံကြောများ အောင့်တက်လာသည့်အထိ မာတောင် တင်းထန်လာတော့၏။ အသက်ပြင်းပြင်း ရှုလိုက်တော့ မိမိယစ်မူးတွယ်တာရသည့် အီချိုချိုရနံ့လေးက ၀မ်းခေါင်းထဲအထိ လှိုက်ဆင်းသွားသည်။ ချစ်ဝတ်ရည်တို့နှင့်
ကိုယ်ရနံ့ နွေးနွေးလေး ရောယှက်နေသည့် ပင်တီ အနံ့။ သခင်မဖွေး တစ်ယောက် ကျွန်ကောင်လေး၏ ပါးစပ်ကို သူမ၀တ်ထားသည့် ပင်တီ လောလောလတ်လတ် ချွတ်ကာ ဆို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ရိုက်ချက်များ နာသည် မနာသည် ခံစားနိုင်ခြင်း မရှိတော့။ တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တိုင်း အသက် ပြင်းပြင်း ရှုသွင်းမိသည်။ အသက်ရှုလိုက်တိုင်း ပင်တီလေး၏ ရနံ့ထူးက ရင်ခေါင်းထဲထိ နင့်ကနဲ
၀င်ဝင်လာ၏။ ချစ်ဝတ်ရည် ပူပူနွေးနွေးတို့၏ အီမွှေးမွှေးရနံ့က ရင်ခေါင်း ၀မ်းဗိုက်မှသည် ငယ်ပါကို ဆောင့်ဆွဲသလို ပြင်းရှ စူးနစ်နေ၏။ ကြိုးတုပ် ခံထားရသည့် လက်တို့ကလည်း ထုံကျဉ်နေပြီမို့ လူတစ်ကိုယ်လုံးတွင် ကျောပေါ်မှ တစ်ချက်ချင်း ကျနေသည့် အနာနှင့် ငယ်ပါဆီမှ အောင့်မျက်မျက် ဝေဒနာတို့က တစ်လှည့်စီ သံသရာလည်နေတော့သည်။ သည်လိုနှင့် ရိုက်ချက် (၁၀) ချက်လုံးလုံး ဒဏ်ရာ နေရာမရွေ့ဘဲ ပြီးမြောက်သွားတော့၏။စူးရှနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်သို့ အလှည့်တွင် စောစောက ပစ်ချလိုက်သည့် ဘီယာဗူးကို အမှတ်မထင် တက်နင်းမိပြီး တစ်ချက်ယိုင်သွား၏။ တုတ်တစ်ချောင်း ဆွဲပြီး ဟန်ပါပါ အမိန့်ပေးနေသည့် မိမိက သူ့ရှေ့တွင် ဟန်ချက် ပျက်သလို ဖြစ်သွား၏။ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထူထူပူပူမို့ ဘီယာဗူးကို ဒေါသထွက်သွားမိသည်။ ဖနောင့်နှင့် တစ်ချက် ဆောင့်နင်းလိုက်တော့ ဘီယာဗူးလေး ပိန်ရှုံ့သွားသည်။ စူးရှ ပါးစပ်တွင်းမှ ပင်တီလေးကို ဆွဲဖယ်ပေးလိုက်သည်။ တစ်လက်စတည်း မျက်လုံးတွင်း စည်းထားသည့် အ၀တ်ကိုပါ ဖြေပေးလိုက်၏။“လာစမ်း.. သည် ဗူးစုတ်ကို လာကောက်.. ဟို အမှိုက်ပုံးထဲ သွားထည့်..”လက်နှစ်ဘက်
နောက်ပြန်တုပ်နှောင်ထားပြီး ဗူးကိုလာကောက် ဟူသည့် အမိန့်ကြောင့် စူးရှ မိမိလုပ်ရမည့် အလုပ်က ဘာဆိုတာ တွေးပြီး ရူးချင်ချင် ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော် အတွန့်မတက်ရဲ။ အရိုက်ခံရတာကြီးက သိပ်မနာလှပေမယ့် ရှက်မိသည်။ မည်သူမျှ မရှိသည့်နေရာ ဆိုသော်ငြား မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြုသမျှ နုနေမိခြင်းက မိမိ ဘ၀တွင် အိပ်မက်တောင် မမက်ခဲ့ဘူးသည့် ကိစ္စ မဟုတ်ပါလား။ မျက်လုံးများ ပုတ်ခပ်ပုတ်ခပ်နှင့် အားယူလိုက်ရသည်။ အမြင်အာရုံက ပြာသလို ၀ါသလို ဖြစ်နေဆဲ။
သူမ ခြေဖျား လှလှလေး ရှေ့တွင် မရှုမလှ ပိန်ရှုံ့နေသည့် ဗူးခွံလေးက မိမိကို လှောင်ပြုံး ပြုံးပြနေသည်။ ဒူးတုပ်လျှက် ဘီယာဗူးကို ပါးစပ်နှင့် ကိုက်ရန်ပြင်၏။ စေ့ထားမိသည့် ဒူးနှစ်ဘက်ကို အတော်ကြီး ကားလိုက်ရသည်။ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ပြားပြားဝပ်သွားအောင် ထိုင်လိုက်မှပင် အဆင်ပြေတော့၏။ မိမိ ပုံစံက အပေါ်စီးမှ ငုံ့မိုးကြည့်နေသည့် သခင်မလေး အတွက်တော့ အတော်ရယ်စရာ ကောင်းနေမည်ထင်သည်။ အရေးထဲ ဗူးစုတ်က ချော်ထွက် နေသေးသည်။ နောက်ပြန်တုပ်ခံထားရသည့် လက်တွေလည်း ကျင်လှပြီ။ ဗူးခွံကို မြန်မြန် ကိုက်မိသွားအောင် အာရုံစိုက်လိုက်၏။ ကြာနေလျှင် သောက်သုံးကိုမကျဘူး ဟူသည့် မြည်တွန်သံကို ကြားရတော့မည် မဟုတ်ပါလား။ပိန်ရှုံ့နေသည့်
ဗူးခွံလေးက ဖွေး စိတ်မှ ပေးနေသော အမိန့်ကို ကြားနေသယောင်ယောင်။ စူးရှတစ်ယောက် ပါးစပ်နှင့် ခဲမည်ကြံလိုက် ချော်ထွက်သွားလိုက် ဖြစ်နေသည့် ဘီယာဗူးပိန်လေးကို မရမက ကိုက်ယူနေရှာသည်မှာ အစာကို အငမ်းမရ လုယက်နေသည့် ခွေးလေးတစ်ကောင်လို ဖြစ်နေသည်။ ခုချိန်များ သူ့လည်ပင်းကို လည်ပတ်လေးတစ်ခုလောက် ဆင်ပေးပြီး ခွေးလေးလို ကြိုးနှင့်ဆွဲကာ လိုရာ ညွှန်ကြားရလျှင် အတော် ပျော်ဘို့ ကောင်းမည်ပင်။
အပိုင်း ၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန် Posted by